06 | March | 2008 | Save Burma
Swansong visit for UN’s Myanmar envoy
BANGKOK – The United Nations special envoy to Myanmar, Ibrahim Gambari, has arrived in the country for the start ofafour-day visit to discuss the military regime’s newly announced plans for political change, includingareferendum onanew constitution later this year to be followed by democratic elections in 2010.
But while the senior envoy remains optimistic about his mission, his third trip to the country since last year’s brutal military crackdown on Buddhist monk-led mass demonstrations, the signs emerging from the military government are that Gambari’s visit could beafinal courtesy call and mark the UN’s forced disengagement from the country’s political reform plans.
“I will continue to press the Myanmar government to engage with [jailed opposition leader] Aung San Suu Kyi inasubstantive dialogue in order to produceapositive outcome that will promote an all-inclusive and transparent process,” Gambari told Asia Times Online by telephone from Singapore in transit to Myanmar.
Yet the military government’s newly announced plans for political change appear to leave the envoy with little room for maneuver during his talks with junta leaders – though he is expected to continue to press for Suu Kyi’s release and her involvement in the political transition from military to some form of democratic rule.
Gambari is scheduled to depart after four days in the country, though he will reportedly bid to extend his stay, according to sources close to the envoy. “Gambari hopes to stay as long as necessary,” UN spokeswoman Michele Montas toldapress briefing in New York this week. Diplomatic pressure from both Beijing and New Delhi opened doors to his visit, according to diplomats familiar with the situation. The junta had originally told the UN envoy that they were not available to host him until after mid-April.
“It’s easy for the junta to agree to Gambari’s visit now, as he really has nothing to talk about,”aBangkok-based diplomat, close to the international mediation efforts with the Myanmar government, told Asia Times Online on condition of anonymity. “[Senior General] Than Shwe’s decision to setatimetable for the roadmap wasastrategic move to block both Maung Aye – his deputy – from assuming power later and the international community, especially Gambari, from playingarole in the process,” he added. Gambari is not expected to meet with Than Shwe during his visit, according to sources familiar with his itinerary.
Gambari, for his part, at least publicly, remains upbeat. “I will continue my consultations in Myanmar and follow up onanumber of recommendations I left with the government during my last trip in November 2007,” he told Asia Times Online by telephone. “These include immediate steps to address the human rights situation; progress on time-bound dialogue between the government and Aung San Suu Kyi; the forthcoming referendum and the electoral process; economic and humanitarian issues; as well asamore regularized process of engagement with the [UN] secretary general’s good offices,” the envoy added.
Deaf junta ears
When Gambari visited Myanmar last November, he tookathree-pronged approach to his mediation effort, sources close to the envoy say. First he asked to be involved inaconstitutional review process after the National Convention had completed drawing up its guidelines; second he wanted to encourage the regime to make the national reconciliation process more inclusive and involve Suu Kyi and her National League for Democracy political party; third he recommended that the government set upaPoverty Alleviation Committee.
Now, with the political change agenda unilaterally set by the junta, some analysts contend that the most Gambari can hope for isaUN role in the junta’s economic reform program. “The junta will ask him to approve the new constitution that has just been finalized, and give it credibility in the hope of deflecting further international pressure,”agovernment source said. “That’s what they would see as his role in any constitutional review process.”
According toaUN insider, Gambari was urged by the Chinese government when he visited Beijing last month to accept the junta’s new charter and its democratic roadmap’s plan to hold general elections. The UN envoy will likely be presented the freshly completed charter, the details of which have so far remainedaclosely guarded junta secret. Diplomats and opposition politicians contacted by Asia Times Online this week said universally that they had been unable to obtainacopy of the charter.
Gambari, similar to previous UN envoys to Myanmar who in the end have been spurned by the junta, faces an uphill task. The recommendations he made in November have in general been ignored, including his proposed confidence-building measures with the political National League for Democracy (NLD)-led opposition. To be fair, the regime did appointaliaison minister, Labor Minister Aung Kyi, to meet regularly with opposition leader Suu Kyi. But the envoy’s recommendation that there be weekly discussions between the two has been sidestepped as there have only been half-a-dozen meetings since he was appointed over five months ago.
Even more crucially, Gambari’s suggestion that if there is to beagenuine dialogue process it was essential for the detained Suu Kyi to meet other NLD members – especially the party’s central executive committee – fell on deaf junta ears. The opposition leader has only been allowed to meet NLD members twice since Gambari’s last visit, though she has been allowed to exchange daily messages with party leaders, according to senior party sources.
During Gambari’s two trips to Myanmar last year, Suu Kyi asked the envoy to try to persuade the regime to allow her regular contact withaliaison officer representing the UN and international community. This was very successful the last time Suu Kyi was under house arrest and she held secret reconciliation talks with the regime in 2003, which were under the supervision of former intelligence chief General Khin Nyunt.
According to UN sources, Gambari had asked for this communication channel to be restored, as well as permission for him to set up his own office in Yangon. To date there has been no progress on that request, though Gambari told Asia Times Online it would be among the issues he raises with the regime during his trip. However, Gambari is not expected to make much headway on these confidence-building measures, let alone on the more substantive issue of Suu Kyi’s and the NLD’s participation in the junta’s plan to hold multi-party elections in 2010.
“We have been very consistent in saying that the recent announcement by the authorities of the referendum on the government constitution in May, and elections that will lead toamulti-party democracy in 2010, areapotentially significant step,” Gambari told journalists in Jakarta recently. “But all the same, this process has to be credible and has to be all-inclusive,” he said.
Central to that objective is Suu Kyi’s release from house arrest. In previous discussions between Gambari’s UN predecessor, Razali Ismail, the then-prime minister and military intelligence chief General Khin Nyunt had agreed that she would be freed after the new constitution was ratified, according to sources close to Razali at the time.
Diplomats monitoring the situation now, however, anticipate the earliest the junta might release her is after the 2010 elections have been held. “The junta do not plan to release her in the near future and are almost certain to detain her until after the elections. Only then do they seearole for her in helping with economic reform,” an Asian diplomat who has regular contact with the regime leaders said.
Gambari is expected to push forarenewed commitment from the junta for her release after the constitutional referendum in May. Gambari told Asia Times Online he would certainly raise the issue of the Nobel Peace Prize-winning opposition leader’s continued detention and her participation in the proposed elections in 2010.
However he will likely be pushing his points on lower-ranking junta officials – and notably not junta leader Than Shwe. “Than Shwe is still furious at Gambari because he smuggled outaletter from Aung San Suu Kyi [which he made public in Singapore on his way back to New York to report to the UN secretary general] last time,” claims the Chiang Mai-based Myanmar academic Win Min.
According to Asian diplomats in contact with Myanmar government officials, junta leaders felt the release of the letter broke with diplomatic protocols. The crux of the matter, though, is that junta leaders remain convinced that Gambari is too close to the United States,aview many regional diplomats endorse. “He is constantly consulting [US First Lady] Laura Bush. She seems to be running policy, not the UN – or that’s how it appears to Than Shwe,” said an Asian diplomat.
Myanmar’s leaders are also reportedly disappointed with the envoy because they feel he has not produced anything in return for their reluctant engagement with the international community. Instead, from the junta’s perspective, the US and European Union proceeded to impose new financial sanctions against the regime in response to its armed crackdown on last year’s street demonstrations.
The junta has since hinted in various ways that the UN envoy’s mediating mission has hitadead end. Government censors have in recent weeks spiked stories in the local press that mentioned Gambari by name or alluded to UN mediation efforts in other global hot spots.
That includedaproposed article in the local Myanmar Times which reported that Prime Minister Thein Sein and Gambari were both coincidentally in Cambodia last December, according to Western diplomats close to the paper’s editors. Last month when UN secretary general Ban Ki-moon and his predecessor Kofi Annan mediated Kenya’s political crisis,aforeign news agency article on the subject in the Myanmar Times was also banned by state censors.
Closer to home, the Association of Southeast Asian Nations, which unlike the US and the European Union has in recent years bid to diplomatically engage the junta, duringaretreat for foreign ministers earlier this month stressed that the 2010 elections must be free and fair. “[Myanmar Foreign Minister] Nyan Win was told in no uncertain terms that while the referendum was consideredadomestic matter – it was essential that is wasacredible process,” according toaSoutheast Asian diplomat who was in attendance at the meeting.
Yet Gambari will likely find delivering even this broad brushstroke message hard-going. “Sometimes, I myself am frustrated that the tangible results are not faster or we have not achieved more,” Gambari told Asia Times Online. “But we have to build on what we have and continue to press for more results … For me, failure is not an option.”
If only Myanmar’s junta concurred.
Larry Jagan previously covered Myanmar politics for the British Broadcasting Corporation. He is currentlyafreelance journalist based in Bangkok.
Tagged with Burma, Gambari, Junta, Larry Jagan, Myanamr
UN envoy arrives back in Burma
Bangkok Post,6March 08
Rangoon (dpa) – United Nations special envoy Ibrahim Gambari arrived Thursday foranew round of talks with the ruling junta aimed at forcing it to include opposition leader Aung San Suu Kyi in the national reconciliation process.
It was Gambari’s third visit to isolated, military-run Burma since last September’s brutal army crackdown on protests in the streets of Rangoon that left at least 31 people dead.
The UN special envoy for Burmese affairs was driven toahotel in Rangoon, the former capital. It is expected that he will eventually fly to Nyapyitaw, the military’s new capital, situated about 350 kilometres north of Rangoon, to hold talks with the junta.
Gambari has sought to force Burma’s ruling junta to openapolitical dialogue with Nobel peace prize laureate Suu Kyi, who has been under house arrest since May 2003, and with other representatives of Burmese society, to forgeanational reconciliation process that is acceptable to the international community.
His efforts, however, have been pre-empted by military supremo Senior General Than Shwe’s announcement last month that he will holdareferendum onanew constitution in May this year, to be followed byageneral election in 2010, according to analysts.
The two steps are part of the junta’s so-called “road map” to democracy,along and winding path that has already taken 14 years just to draftanew constitution.
The new constitution, drawn up byamilitary-appointed body, will enshrine the military’s political role in any future elected government.
A general election, now scheduled at an unknown date in 2010, would put an end once and for all to the legitimate claims to power by Suu Kyi and her National League for Democracy (NLD) party that won the 1990 general election byalandslide.
It is anticipated that Suu Kyi, who has spent 12 of the past 18 years under house arrest, will be barred from contesting the 2010 polls, as she is prevented from doing so by the new constitution that stipulated that anyone married toaforeigner is ineligible to run for public office.
Suu Kyi was married to the late Michael Aris,ahistory professor at Oxford University.
Western democracies such as the US and European Union are still pressuring the military to include Suu Kyi in the reconcilation process.
“The future of that regime is bleak, so they should try to respond,” Christopher Hill, US assistant secretary of state for East Asia and Pacific affairs, toldaseminar last week in Bangkok.
Since 1962, Burma has been ruled byamilitary regime that has earned itself one of the world’s worst human rights records after two brutal crackdowns on pro-democracy movements in 1988 and more recently in September 2007. It has arrested thousands of political dissidents including Suu Kyi.
The senior diplomat warned that the US would continue to put diplomatic pressure on Burma, including sanctions, untilalegitimate solution to the country’s problems is found.
“So let’s see if the Burmese authorities understand that we haveahavealot of options for dealing with Burma, but we do not have the option of turning our backs and forgetting the problem,” said Hill.
Tagged with Bangkok Post, Burma, Gambari, Myanmar
II. UNDERLYING CAUSES OF THE EVENTS OF SEPTEMBER AND OCTOBER 2007
37. The use of lethal force by law enforcement officials from 26 to 29 September 2007 in Myanmar was inconsistent with the fundamental principles reflected in the basic international norms deriving from international customary law. They ignored the principles of necessity and proportionality which are included in article3of the Code of Conduct for Law Enforcement Officials and its commentary. Article3states that: “Law enforcement officials may use force only when strictly necessary and to the extent required for the performance of their duty.” The commentary appended to this provision explains that “in no case should this provision be interpreted to authorize the use of force which is disproportionate to the legitimate objective to be achieved”. Similarly, the in the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, the most general statement on the use of lethal force, principle 9, provides that: “In any event, intentional lethal use of firearms may only be made when strictly unavoidable in order to protect life.” Whereas the Myanmar Code of Criminal Procedure provides for the use of civil force (article 128) and military force (article 129) to disperse an assembly, it also provides for the use of as little force as is consistent with dispersing an assembly, in order to avoid “injury to person and property” (article 130). From 26 to 29 September, the security forces without doubt exceeded the limits of the power conferred on them by the law.
40. The USDA was established by the State Peace and Development Council (SPDC) in 1993 and in 2006 announced its intention to becomeapolitical party and field candidates in the next election. The Special Rapporteur expressed concerns in his previous reports over various allegations of involvement by members of USDA in acts of political and criminal violence. The existence of the SAS was first reported in 2003 when they were allegedly involved in the tragic incident of Depayin. According to sources, the SAS was reportedly already involved in incidents in 1997. The SAS, which has no legal status, isagrassroots force composed of civilians who reportedly assist the authorities in providing law enforcement, paramilitary services and military intelligence without being on the payroll of the Government. It includes members of the fire brigades, first aid organizations, women’s organizations and USDA, as well as criminals/convicts released from jails, members of local gangs and the very poor and unemployed.
(vii)To conduct an independent and thorough investigation into the killings, severe beatings, hostage taking, torture and disappearances;
(viii)To ban militia as an illegal group in accordance with the law of Myanmar;
(xii)To invite an international commission of inquiry or fact-finding mission to investigate inamore comprehensive manner the recent events.
(xiii)To develop an effective channel for follow-up communications and cooperation with the Special Rapporteur and provide him and his support team with regular access to the country;
(xiv)To consider the implementation of the plan of action for the release of all political prisoners as suggested by the Special Rapporteur in his last report to the General Assembly (A/62/223);
(xv)To pursue the dialogue with Daw Aung San Suu Kyi through the Minister of Labour and Liaison Minister;
(xvi)To repeal or amend old laws and regulations in relation to the right to peaceful assembly, the right to freedom of expression, the right to freedom of movement and all matters related to criminal and penal procedures and prison regulations;
(xvii)Within the context of the National Convention and recent crisis, seek technical assistance to repeal or amend the penal code and code of criminal procedure and to review the rules that govern the policing of demonstrations.
Monks started marching at around 10 am. The gates of the pagoda were locked and all roads were blocked by the security forces (riot police and army). At around 11.30 am, more riot police arrived at the site. As they could not pursue their peaceful walk, monks sat down. According toadirect testimony one of the monk leaders, Ven Kovida, who participated in the demonstration,adelegation of monks attempted to enter into negotiations with the security forces. The monks were ordered to disperse and get into military trucks to be brought back to their monasteries. Fearing arrests or other forms of reprisals, the monks agreed to disperse with the condition of going back to their monasteries on their own. The security forces refused. At around 11.45 am, violence began at Shwedagon pagoda. As the monks refused to disperse, security forces started beating monks on their heads with rubber batons. Teargas and smoke grenades were reportedly used. One victim who witnessed the crackdown heard orders to beat monks coming from behind the riot police. Whereas unconfirmed allegations of killings were received, several witnesses interviewed saw monks severely beaten who were lying down on the floor without moving. They were not in position to say if they were dead or unconscious. Several arrests were also reported by various credible sources.
New Light of Myanmar, September 25, 2007.
Sankei News, October 5, 2007.
The principles of international human rights law applicable in such contexts draw significantly upon the Code of Conduct for Law Enforcement Officials and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.
The Depayin massacre occurred on 30 May 2003, when at least 70 people associated with the NLD were allegedly killed byaGovernment-sponsored mob.
New Light of Myanmar, October 5, 2007.
The Official Secrets Act of 1923, the Burma Wireless Telegraphy Act of 1933, Section 122, Penal Code of Burma, the Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions, Emergency Provisions Act of 1950, the Printers and Publishers Registration Law of 1962, State Protection Law of 1975 (a.k.a. the “Law to Safeguard the State from the Dangers of Destructive Elements”), the Television and Video Law, the Motion Picture Law and the Computer Science Development Law
New Light of Myanmar, September, 25, 2007.
The formalization of the Human Rights Body was signed on 14 November 2997 by the Supreme Authority SPDC Notification, State P 53/2007, composed of4patrons (Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Key Justice and Attorney General) and 21 members.
See also International Herald Tribune, October 26, 2007.
New Light of Myanmar, September 27, 2007.
New Light of Myanmar, September 28, 2007
New Light of Myanmar, September, 28, 2007.
Tagged with Pinheiro
“မမ” ဘာသာပြန်ပြီး ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှုမှ ဖြန့်ချိသည်။
Download – (PDF) translation-of-paulo-sergio-pinheiros-report.pdf
Tagged with ပီညဲရိုး
မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အာဏာရှင် လူရမ်းကား ခေါင်းဆောင်တသိုက်ကတော့ ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းနေပါပြီ။ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာ မစဉ်းစားပဲ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လို ပိတ်ဆို့ရမလဲ၊ ပြည်သူတွေ စိတ်ဆင်းရဲအောင်။ ပြည်သူတွေ ကျပ်သထက်ကျပ်လာအောင် ဘယ်လို နှိပ်ကွပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားနေသလားလို့တောင် ပြောရတော့မလို ဖြစ်နေပါပြီ။
စစ်အစိုးရရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်ရန်လိုနေတဲ့ လူတယောက်ဟာ အခြားသူတွေနဲ့ ရန်မဖြစ်ရရင် မနေနိုင်သလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို ရန်သူလို သဘောထားမှ၊ ပြည်သူတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက် လုပ်ရမှ သူတို့ အာဏာမြဲနေမယ်လို့များ တွက်နေသလားပဲ။
ဒါကို လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ်ကြည့်ရင် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဖြစ်မြောက်အောင် မလုပ်တဲ့သူတွေဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ သူတွေပဲလို့ တပ်အပ်သေချာ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို တဖွဖွ ပြောရင်းနဲ့ပဲ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းဇေယျာ စတဲ့ (၈၈) မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ထောင်ထဲဝင်နေရပါတယ်။ ဒါကို ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတခု အနေနဲ့ ပြလို့ရနေပါတယ်။
တကယ်တော့ နအဖဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ်မှာ သူတို့ စေတနာ မထားနိုင်တာတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ တနေ့တခြား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖော်ပြလာနေပါတယ်။ နအဖ ဇာတိ ပြနေပါပြီ။
နအဖက သတင်းမီဒီယာနဲ့ ပညာရေး အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုပဲ လိုက်ပိတ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ လူထုအကြား သတင်းမှန်နဲ့ ဗဟုသုတတွေ ပိုမို စီးဆင်း ပြန့်ှနှံ့အောင်၊ ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေး အသိတရား ပိုမို နိုးကြားနေအောင် ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာ ဘလော့ဂါသမားတွေ၊ မြန်မာသတင်းဌာနတွေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက် ပညာရှင်တွေ၊ လူထုသတင်းထောက်တွေ၊ ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာနတွေ၊ စာအုပ်စာတမ်း ထုတ်ဝေ ဖြန့်ဖြူးပေးနေသူတွေက ညီညီညွတ်ညွတ် တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ပူးပေါင်း ကူညီပေးကြရပါမယ်။ လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ အတော်လေး အားရ ကျေနပ်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူတွေ ကျပ်သထက်ကျပ်လာအောင် တမင်တကာ ဖန်တီးနေတဲ့အကြောင်း၊ ပြည်သူတွေ တိုးတက်သွားမှာကို မလိုလားပဲ မရမက လိုက်လံ ပိတ်ဆို့နေတဲ့အကြောင်း သက်သေထူလိုက်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ကတော့ ဂြိုဟ်တု စလောင်း ရုပ်သံကြေး တနှစ်တာ သုံးစွဲခကို ကျပ်တသန်းထိ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အမြဲ ပြောပြောနေတဲ့ ပညာရေး ရည်မှန်းချက်နဲ့လည်း လုံးလုံးကြီး ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
စလောင်း ရုပ်သံကြေး တိုးမြှင့်တာကို နအဖက တရားဝင် ကြေညာချက် မထုတ်ပြန်ပါဘူး၊ ဘယ်လိုမှ စောဒက တက်လို့ မရနိုင်တဲ့ “အထက်အမိန့်” ဆိုတာနဲ့ နှုတ်မိန့် ပေးသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (လောင်စာဆီခွဲတမ်း တ၀က် လျှော့မယ်လို့ သတင်းထွက်သွားတုန်းကလို ဖြစ်နေပါတယ်။)
အဲဒီအကြောင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် သတင်းတွေ စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သတင်းတွေ ၀င်လာရင်လည်း စုစည်းသတင်းများအဖြစ်နဲ့ ထပ်ဖြည့်ထားပေးပါမယ်။
၂၀၀၈ ဇန်န၀ါရီ (၂)ရက်–
ဂြိုဟ်တုစလောင်းလိုင်စင်ကြေး ကျပ် (၁) သန်းထိ စစ်အစိုးရ ရုတ်တရက် တိုးမြှင့်
NEJ/ ၂ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၈
“လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူတွေ နှစ်စဉ်ကြေးဆောင်မယ်ဆိုရင် ဒီလကစပြီး (၁၀) သိန်းဆောင်ရမယ်။ ဒီလကုန်လို့မှ နှစ်စဉ်ကြေးမဆောင်ရင် (၃) သောင်…” အပြည့်အစုံသို့
လူထုနားမျက်စေ့ ပိတ်ဖို့ ဂြိုလ်တုစလောင်းကြေး အဆမတန် တိုးမြှင့်
အာဏာပိုင်တွေက ဂြိုလ်တု ရုပ်မြင် သံကြားစက် လိုင်စင်ကြေးတွေ အဆရာကျော် တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်တဲ့ အပေါ် နိုင်ငံတကာ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ကြီးတခုဖြစ်တဲ့ နယ်စည်းမခြား သတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF က ဒါဟာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် နောက်ထပ် ဖိနှိပ်မှုအဖြစ် ဝေဖန်ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။… (အပြည့်အစုံသို့)
ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု စလောင်းအတွက် အခွန်ငွေကို ကျပ် ၆၀၀၀ ကနေ ကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်းအထိ တိုးမြှင့် ကောက်ခံနေ…..(အပြည့်အစုံသို့)
မြန်မာပြည်တွင် ဂြိုလ်တု စလောင်းခွန်ကို ၁၆၆ ဆ မြင့်တက်
ဂြိုလ်တုစလောင်း အသုံးပြုခအဖြစ် အစိုးရသို့ နှစ်စဉ်ပေးသွင်းရသော အခွန်ငွေကျပ်ကို (၆ဝဝဝ) ကျပ်မှ (၁ဝ) သိန်း သို့ ရုတ်တရက် တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတရပ်အရ သိရသည်။
မြန်မာ့စာတိုက်နှင့် ကြေနန်းဌာနမှ အမည်မဖော်လိုသော အရာရှိများနှင့် ဂြိုလ်တုစလောင်း အသုံးပြုသူ ရန်ကုန်မြို့ခံ တဦးကို ကိုးကားသော အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတပုဒ်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဂြိုလ်တု စလောင်းခွန်များကို ရုတ်တရက် တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းကို………..အပြည့်အစုံသို့
ဂြိုဟ်တုစလောင်း လိုင်စင်ခွန်ငွေ အဆမတန်တိုးကောက်မည်
ဂြိုဟ်တုစလောင်းတပ်ဆင်သူများအား ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ မှစ၍ နှစ်စဉ်လိုင်စင်ကြေး ၆ ထောင်မှ ၁၀ သိန်းအထိ တိုးမြှင့် ကောက်ယူသွားမည် ဖြစ်ပြီး စတင် တပ်ဆင်လျှင်ပေးသွင်းရသည့် ကျပ်တသောင်း ၂ ထောင်မှ သိန်း ၂၀ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ တာဝန်ရှိသူများမှတဆင့် သိ……. (အပြည့်အစုံ သို့)
RFA (မြန်မာ) သတင်း
ဂြိုဟ်တုစလောင်း နှစ်စဉ်ကြေး အဆများစွာ တိုးမြှင့်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စက်တယ်လိုက် ဂြိုဟ်တုစလောင်း တပ်ဆင်ခွင့် လိုင်စင်ကြေးတွေကို အဆပေါင်း ၁၆၇ ဆ တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလို ရုပ်မြင်သံကြား ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်တုစလောင်း နှစ်စဉ်ကြေးတွေကို အရင်က တနှစ်ကို ကျပ်ငွေ ၆ ထောင်ပဲ ပေးဆောင်ရတာကို၊ အခုအခါ ကျပ် ၁၀ သိန်းအထိ တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်တာ…….(အပြည့်အစုံသို့)
ဗီအိုအေ (မြန်မာ) သတင်း
ဂြိုလ်တုစလောင်း လိုင်စင်ကြေး အဆတရာကျော် တိုးမြင့် ကောက်ခံမှုအပေါ် မြန်မာ သတင်းသမားများ ဝေဖန် ကန့်ကွက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဂြိုလ်တုစလောင်း ရုပ်သံ လိုင်စင်ကြေးတွေ အဆမတန် တိုးမြင့် လိုက်တာဟာ နိုင်ငံခြားသတင်း ပိတ်ဆို့ဖို့ အစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းချက် ဖြစ်ပြီး ဒီလို သတင်း အမှောင်ချမှု မျိုးတွေကို ဒီကနေ့ ကမ္ဘာအခြေအနေနဲ့ ရေရှည် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာ သတင်းသမားတွေက ပြောကြပါတယ်။ အများပြည်သူတွေကတော့ အခုလို ဈေးနှုန်းမျိုးနဲ့ ဆိုရင်တော့ သူတို့ ဆက်ပြီး ဂြိုလ်တုစလောင်း အသုံးပြုဖို့ ခက်နေကြပြီ……. (အပြည့်အစုံသို့)
ဂြိုဟ်တုစလောင်း နှစ်စဉ်ကြေး အဆမတန် တိုးကောက်၍ သတင်းစီးဆင်းမှု အဟန့်အတားဖြစ်
Thursday, 03 January 2008 19:53 – မြန်မာစံတော်ချိန်
နအဖ က သတင်းစီးဆင်းမှုကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဟန့်တားခဲ့ရာတွင် ဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာတခု ဖြစ်သည့် ဂြိုဟ်တုစလောင်း နှစ်စဉ်လိုင်စင်ကြေးကို ယခုနှစ်ဦးပိုင်းမှ စတင်ကာ အဆပေါင်း ၁၆၆ ဆ တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်သဖြင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာ … (အပြည့်အစုံသို့)
စလောင်း လိုင်စင်ကြေး ၁၀ သိန်းရဲ့ အကျိုးဆက်များ ဘယ်လို ရှိမလဲ
တပတ်အတွင်း သတင်းသုံးသပ်ချက် စကားဝိုင်း (၂၀၀၈ ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်)
အခု တပတ် တနင်္ဂနွေ ဆွေးနွေးပွဲ စကားဝိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဂြိုလ်တု၊ တီဗွီ စလောင်း တပ်ဆင်ခွင့် လိုင်စင်ကြေးကို တနှစ် ကျပ်ငွေ ဆယ်သိန်း သတ်မှတ်လိုက်လို့ ပြည်သူတွေ စိတ်ဆင်းရဲ ကသိကအောက် ဖြစ်နေကြရတဲ့ ကိစ္စ၊ စစ်အစိုးရက ဘာကြောင့် ဒီလောက် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်လိုက်တာလဲ၊ ဘယ်လို အကျိုးဆက်တွေ ပေါ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက စစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး အိန္ဒိယ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်၊၊
ဧည့်သည်တော်တွေ အဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူ ဦးဝင်းမင်း၊ သတင်းမီဒီယာ ကွန်ယက် အဖွဲ့ အယ်ဒီတာ ဦးအောင်နိုင်နဲ့ အာအက်ဖ်အေ သတင်းထောက် ကိုညိုတို့ကို ဦးခင်မောင်ညိန်းက ရုံးချုပ်ကနေ ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဂြိုဟ်တုစလောင်းအခွန် ကျပ် ၅ သောင်းသို့ ပြန်လည်လျော့ကျ
Monday, 07 January 2008 20:34 – မြန်မာစံတော်ချိန်
ဂြိုဟ်တုစလောင်း တပ်ဆင်ခကို ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် နအဖ စစ်အစိုးရက ကျပ် ၁ဝ သိန်း တိုးမြှင့်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကျပ် ၅ သောင်းသို့ ပြန်လည်လျှော့ချမည် ဟူသော သတင်းများ ရန်ကုန်မြို့ခံများအကြား ပျံ့နှံ့နေ … (အပြည့်အစုံသို့)
ဂြိုဟ်တုစလောင်း လိုင်စင်ကြေးတိုးမြှင့်မှု ယာယီရပ်ဆိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ဂြိုဟ်တုစလောင်း မှတ်ပုံတင်ကြေးတွေကို မကြာသေးခင်ကဘဲ အဆမတန် မြှင့်တင် လိုက်တဲ့အတွက် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောဆိုနေချိန်မှာပဲ ဒီကိစ္စကို အခုတော့
ယာယီဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂြိုဟ်တုလောင်း အသုံးပြုသူတွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းထားတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။…… (အပြည့်အစုံသို့)
ဂြိုဟ်တုစလောင်း လိုင်စင်ကြေးနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ မတည်ငြိမ်
လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်းက ဂြိုဟ်တုစလောင်းလိုင်စင်ကြေးကို တနှစ်လျှင် ၆ ထောင်ကျပ်မှ ကျပ် ၁၀ သိန်းအထိ တိုးမြှင့်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ လိုင်စင်ကြေးကို ပြန်လည်လျှော့ချပေးခဲ့ သော်လည်း နှစ်စဉ်ကြေးနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
နယူးဒေလီ။ ။မြန်မာ့အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မကြာခင်က စစ်အစိုးရထံ ဂြိုဟ်တုစလောင်း တပ်ဆင်ခွင့်ရရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ သံတမန် သတင်းရပ်ကွက်က ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ သူမသည် လွန်ခဲ့သော ၁၈ နှစ်အတွင်း ၁၂ နှစ်တာမျှ အထိန်းသိမ်း ခံနေခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
ဤသို့ လျှောက်ထားမှုသည် ပထမအကြိမ် မဟုတ်ကြောင်း အဆိုပါ သတင်းရပ်ကွက်ကပင် ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း အင်းယားကန် နံဘေးရှိ သူမ၏ အိမ်တွင် ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေး စလောင်းဖြင့် ကြည့်ရှုရသော ရုပ်မြင်သံကြားစက် တပ်ဆင်ရန် လျှောက်ထားမှုကို ယခင်အကြိမ်များက ပယ်ချခဲ့ပြီး ယခုတကြိမ်တွင်လည်း တုံပြန်မှု မရှိသေးကြောင်း….
ဂြိုဟ်တုစလောင်းလိုင်စင်ကြေး တိုးမြှင့်သည့်သတင်း ဖော်ပြခဲ့သည့် ဂျာနယ်အချို့ ထုတ်ဝေခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
စလောင်းသတင်းကြောင့် မြန်မာတိုင်းမ်(စ်)ဂျာနယ် တပတ်ပိတ်ခံရ၍ အယ်ဒီတာလေးဦး နှုတ်ထွက်ပေးရ
မြန်မာတိုင်းမ်(စ်) ဂျာနယ်အပိတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီက မြန်မာနိုင်ငံ စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်းက မည်သို့မျှ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မပြုဘဲ ဖုန်းချသွားခဲ့သည်။
၂၀၀၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် မြန်မာတိုင်းဂျာနယ်၏ ကြော်ငြာတခုတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို လူသတ်သမားဟု ဖော်ပြထားသည့် လျှို့ဝှက်စာတန်း ထည့်သွင်းဖော်ပြမိသဖြင့် ထွက်ပြီးသားဂျာနယ်များကို လိုက်လံ သိမ်းယူခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
Satellite TV costs soar in Burma
Myanmar junta increases satellite TV levy by 16600 percent
Myanmar Regime Imposes Satellite TV Fee The Associated Press
Myanmar junta hikes satellite TV fees Reuters
Myanmar orders massive hike in satellite TV fees Forbes
Raise high the license fee, Burma, and see less
Myanmar junta hikes satellite TV fees (Reuters)
Burma: 167-fold increase in price of satellite dish licences Reporters without borders (press release), France –
Tagged with ဂြိုဟ်တု စလောင်း ရု�
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၈၈၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာမင်းစစ်ရှုံး၍ ရှမ်းမင်း သိုဟန်ဘွားလက်သို့ အင်းဝ နေ ပြည်တော် ကျရောက်ခဲ့သည်၊ ရှမ်းမင်း သိုဟန်ဘွားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ချေ၊ သို့ဖြစ်၍ သိုဟန်ဘွားသည် ရဟန်းသံဃာတော် တို့အား ရန်သူသဖွယ် ထင်မှတ်ထားခဲ့သည်၊ သူ့ထီးနန်း စည်းစိမ်ကို လုယူမည့်သူများ ဖြစ်သည်ဟုလည်း အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားခဲ့သည်၊ သူသည် မင်းဆိုး မင်းညစ်တစ်ပါး ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ ကျောင်းကန်ဘုရားများမှ ကြေးးဆင်းတုတော်၊ ကြေးခေါင်းလောင်း၊ ကြေးစည် မှန်သမျှတို့ကို အတင်းသိမ်းပိုက်ကာ အမြောက်ကျည်ဆံ ကျိုရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်၊ သိုဟန်ဘွားလက်ထက်တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် တိမ်ဖုံးသည့့် လ ပမာ ညှိုးငယ် စွာရှိခဲ့တော့သည်၊ သာသနာတွင်သာ မဟုတ်သေး မြန်မာပြည်သူ တို့လည်း ယနေ့ စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် နေရသကဲ့သို့ ကြိမ်မီးအုံးပမာ တအုံနွေးနွေး ရှိနေခဲ့ကြရသည်။
အထက်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ရဟန်းသံဃာများကို ရန်သူအဖြစ်အမြဲတမ်းမြင် နေသော သိုဟန်ဘွားသည် ရဟန်းတော် တို့အား အမြစ်ပြတ်ရှင်းလင်းပစ်ရန် ကြံစည်ခဲ့လေသည်၊ ကြံစည်ပုံမှာ အင်းဝနေပြည်တော် တောင်ဖက်အရပ်ရှိ တောင်ဖလူလယ်ပြင်တွင် တဲပြင်ကန္နား ကြီးမားစွာထိုးပြီးလျှင် ‘အင်းဝနေပြည်တော် တစ်ဝှန်းရှိ ရဟန်းသံဃာတော်အားလုံးတို့အား ဖူးမြှော်ကန်တော့ ပြီး ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းလိုပါသဖြင့် ကြွရောက်ကြပါရန်’ဟု လျှောက်ထားစေပြီး တောင်ဖလူ လယ်ပြင်ရှိ မဏ္ဏပ်၊ ကန္နား ထိုးထားရာသို့ ပင့်ခေါ်စေခဲ့ပါသည်၊ သံဃာတော်များ မကြွလာမီ ကြီးမား သော ဆင်တပ်၊ မြင်းတပ်၊ ခြေလျှင်တပ်တို့ကိုလည်း မဏ္ဏပ်ကို ၀ိုင်းရံထားစေသည်၊ သံဃာတော်များ ကြွချီလာကြသောအခါ အချို့သံဃာတော်များက ဆွမ်းကျွေးပင့်တယ်ဆိုပြီး ဘာပြုလို့ စစ်တပ်ကြီးနဲ့ ၀ိုင်းထားရတာလဲ ဟု အမေးတော်ရှိခဲ့ကြသည်၊ အဖြေက “စစ်အင်္ဂါလေးပါးဖြင့် ခင်းကျင်းပြီး ဂုဏ်ပြု ကြည်ညို ချင်လို့ပါဘုရား”ဟု အမတ်များက လျှောက်ထားကြသဖြင့် သံဃာတော်များမှာ သံသယကင်းစွာဖြင့် ဆက်ကပ်သော ဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးတော်မှုကြလေသည်။
သံဃာတော်များ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးနေစဉ် သိုဟန်ဘွားသည် မူလကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့သည့်အတိုင်း သူ့စစ်တပ်ကို သံဃာတော် များအား ၀ိုင်းဝန်းသတ်ဖြတ်ရန် အမိန့်ပေးလိုက်လေသည်၊ အချက်ပေးအမိန့်သံ ရသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဆင်တပ် မြင်းတပ် ခြေလျှင်တပ်တို့ဖြင့် သံဃာတော်များအား အတင်းဝင်ရောက် ထိုးခုတ်သတ်ဖြစ်ကြလေတော့သည်၊ ဆွမ်းကျွေးပွဲမှသည် လူသတ်ပွဲ မြေပြင်မှသည် သွေးပင်လယ်သို့ တမုဟုတ်ခြင်း ပြောင်းလဲသွားလေတော့သည်၊ ဆရာတော် သံဃာတော်တို့ ညည်းညူ အော်ဟစ်သံများ၊ ဒါးခုတ်သံ၊ လှံဖြင့်ထိုးသံ၊ သိုဟန်ဘွားနှင့် စစ်သားများ၏ အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်း ညာသံပေးသံတို့က ကွင်းပြင်တခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းသွားလေတော့သည်၊ စုစုပေါင်း ပင့်သံဃာ (၇၀၀) ကျော်အနက် အနည်းငယ်မျှသာ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြ လေတော့၏။
အသတ်ခံလိုက်ရသော ဆရာတော် သံဃာတော်များထဲတွင် နာမည်ကျော် “မဏိသာရမဉ္ဇူသာ” ခေါ်သည့် ဋီကာကျော်အဖွင့် ကျမ်းကြီးကို ပြုစုရေးသား တော်မူခဲ့သော ‘အရှင်အရိယ၀ံသ’ နှင့် အခြားသော မြန်မာ့ ခေတ်ဆန်းစာပေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြသော စာတတ်အကျော် ရဟန်းဆရာတော်များ ပါဝင်သွားခဲ့ကြပါသည်၊ အော် … ရဟန်းကို အဟိတ် တိရိစ္ဆာန် တွေက သတ်လိုက်ကြ လေပြီတကား၊ သံဃာတော်များ အသတ်အဖြတ်ခံရသော သတင်းကြားကြရသော အင်းဝနေပြည်တော် တခုလုံးမှ ပြည်သူများသည် မျက်ရည်စိုရွှဲ ငိုပွဲဆင်ကြရုံမှအပ ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပေ၊ သိုဟန်ဘွား၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှမ်းနှင့်မြန်မာ အမှုထမ်းများမှာ တဖက်သတ် အဖိအနှိပ်ခံနေ ခဲ့ကြရပြီး ယခုခေတ် န.အ.ဖက ကြံ့ဖွတ် နှင့် စွမ်းအားရှင်တို့ကို အသုံးချကာ စစ်တပ် အား မထောက်ခံသောသူများအား နှိပ်စက်ညှင်းပမ်း နေပုံနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ခဲ့လေလျှော့ သလား၊ ထို ဘာသာရေး ခေါင်းပါးရအရပ်မှာ မြန်မာအများစုတို့မှာ အင်းဝနေ ပြည်တော်မှထွက်ခွာကြကာ အောက်မြန်မာပြည် မြန်မာမင်းရှိရာသို့ ၀င်ရောက်ခို လှုံခဲ့ကြရလေသည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြည်သူ၊ပြည်သားတို့အဖို့ ခိုကိုးရာမဲ့ကာ ဘ၀တခုလုံး ကြိမ်မီးအုံး သကဲ့သို့ ဖြစ်နေရသည်ကို မကြည့်ရက် မရှုရက်နိုင် သူကား သိုဟန်ဘွား၏ လက်အောက်တွင် အမှုတော်ထမ်းနေ သည့် ရိုးသားဖြောင့်မတ် တည်ကြည်ပြီး စိတ်နှလုံးသား ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သော မင်းကြီးရန်နောင် ဆိုသူပင်ဖြစ်ပါ၏၊ မင်းကြီးရန်နောင်သည် မြန်မာတို့ဘက်မှ အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ် သည့်အတွက် မြန်မာမူးမတ်များ၏ မကျေနပ်ချက်တို့ ကိုလည်း သိထားသူဖြစ်ပါ၍ ထို အခါအခွင့်ကိုသာ ငံ့လင့်နေသူပင် ဖြစ်တန်ရာတည်း။
အင်းဝနန်းတော် မကျဆုံးမီက မြန်မာဘုရင်အဆက်ဆက်တို့ အသုံးပြုခဲ့သော ‘ယိမ်းနွဲ့ပါး’ အမည်ရှိ ဒါးတစ်ချောင်းရှိခဲ့သည်၊ ထိုဒါးကို မင်းကြီးရန်နောင်က သိမ်းဆည်းထားသည်၊ နန်းစဉ် သုံးဒါး ဖြစ်သဖြင့် အထူးဝိသေသ ဂုဏ်ပုဒ်များနှင့်ပြည့်စုံ သောဒါးလည်းဖြစ်သည်၊ ဘယ်လိုပြည့်စုံ သလဲဆိုလျှင် မြင်းစီးနေသောသူကို ထို ဒါးဖြင့် စလွယ်သိုင်း ခုတ်ပိုင်းလိုက်က မြင်းပေါ်က လူရော၊ မြင်းပါ ပြတ်ကျသည့်ဒါးဖြစ်သည် ဆို သည့် ကောင်းခြင်း အင်္ဂါ ပြည့်စုံသော ဒါးဖြစ်သည်၊ တနေ့တွင် သိုဟန်ဘွားမင်းသည် ယာယီဓာတ်ကိန်းခန်းကျသည်ဟု ဆိုပြီး တောင်ဖလူလယ်ပြင် တွင် ယာယီတဲနန်းဆောက် စံနေသည်၊ ထိုအချိန်တွင် ရှမ်းရောမြန်မာ မူးမတ်များပါ လိုက်ပါခစား ကြမည်ဖြစ်ရာ မင်းကြီးရန်နောင်၏ လျှောက်ထားတင်ပြချက် အရ မည်သူမျှလက်နက် ကိုင်ဆောင်ခွင့် ပြုထားခြင်းမရှိချေ၊ လက်ချည်းသာ ၀င်ရောက်ခစား ကြရခြင်းဖြစ်သည်၊ ထိုသို့ခစားကြရာတွင် မြန်မာမူးမတ်တို့၏ အကြီးအကဲ မင်းကြီးရန်နောင်က တောင်ဖလူလယ်ပြင် ယာယီတဲနန်း သဲပြင်များ အောက်တွင် နေရာများကို မှတ်သားထားပြီး ငှက်ကြီးတောင် ဒါးရှည်များ၊ လှံများ မြုတ်ထားကြရန် လှို့ဝှက်ညွှန်ကြားထားပြီး နောက်တနေ့ ညီလာခံဝင်ချိန်တွင် အချက်ပေးလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အနီးဆုံးရန်သူကို အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ဖို့ အမိန့်ပေးထားလိုက်ပြီ ဖြစ်လေသည်။
နောက်တနေ့ ညီလာခံဝင်ချိန်တွင် ရှမ်းနှင့်မြန်မာမူးမတ်များ ကိုယ့်နေရာကို အသီးသီး နေရာ ယူထိုင်လိုက်ကြပြီးနောက် မင်းကြီးရန်နောင်၏ အချက်ပေးသံကို ရင်ခုန်သံ တဒိန်းဒိန်းဖြင့် စောင့်စား နေခဲ့ကြသည်၊ ထိုအချိန်သည် အိပ်မပျော်သောသူတို့ ညတာ လိုရှည်လွန်းလှပေစွ၊ မိမိတို့အကြံအစည် တချက်လွဲမှားသွားပါ လျှင် သိုဟန်ဘွားလို မင်းဆိုးမင်းညစ်၏ လက်တွင် အားလုံး မရှုမလှ အသက်ပျောက်ကြရမှာ မဟုတ်ပါ လား၊ ညီလာခံ စပြီးနောက် မင်းကြီးရန်နောင်က သိုဟန်ဘွား စံနေသည့် ယာယီပလ္လင်နား သို့သွား မတ်တပ်ရပ်ကာ ပလ္လင်ရှေ့တွင် ရှိသော ရှေးနန်းစဉ်သုံး ဓားများ၏ရာဇ၀င်ကို ပြောပြလျက်ရှိပြီး အာရုံဝင်စားအောင် ဖန်တီးကာ သိုဟန်ဘွားမင်း စိတ်ဝင်စားမှန်း သိလာသောအခါ၊ ထိုနန်းစဉ်သုံး ဓားများထဲမှ “ယိမ်းနွဲ့ပါးဓား” ကိုကောက်ကိုင်ကာ “ကိုယ်တော်ဘုရား ဒီ ဓားဟာ ရှေးမြန်မာဘုရင်များ အစဉ်အဆက် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဒါးဖြစ်ပါတယ်၊ သူ့အမည်က ယိမ်းနွဲ့ပါး လို့ခေါ်ပါတယ်၊ ဒီဓားဟာ ဘယ်လောက်များ ထက်သလဲ ဆိုရင် မြင်းပေါ်ကလူကို ခုတ်ချရင် လူကော မြင်းကော ပြတ်ကျအောင် ပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ဓား ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား” ဟု ပြောပြောဆိုဆို ဓားကို လက်နှစ်ဘက်နှင့် မိမိရရ ကိုင်ကာ ညာသန်ဖြစ် သည့်မင်းကြီးရန်နောင်က သိုဟန်ဘွား၏ ဘယ်ဘက်လည်တိုင်မှ ပိုင်းဖြတ်ချလိုက်ရာ လူကော သလွန်ပါ တိကနဲ ပြတ်ကျသွားလေတော့သည်၊ မင်းကြီးရန်နောင်က စခုတ်လိုက်သည် နှင့်တပြိုင်နက် ကျန်သော မူးမတ်များကလည်း ယမန်နေ့ ကတည်းက မိမိတို့ထိုင်နေရာ အောက်တွင် အသီးသီးဝှက် မြုပ်ထားခဲ့ကြသော ဓားများကိုထုတ်ကာ အနီးဆုံးရန်သူ သိုဟန်ဘွားဘက်တော်သားများအား အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းလိုက်ကြရာ မင်းဆိုး မင်းညစ် သာသနာတော်ကို စော်ကားသူ၊ ရဟန်းသံဃာ ရာပေါင်းများစွာကိုသတ်ဖြတ်သူ သိုဟန်ဘွား၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အုပ်ချုပ်ရေးသည် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရလေသည်။
မင်းကြီးရန်နောင်သည် မင်းဆိုးမင်းညစ်တစ်ပါးက ပြည်သူပြည်သားများအား မတရားနှိပ်စက် နေသည်ကို ဒါဏ်မခံနိုင် သဖြင့်သာ မြန်မာမူးမတ်များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ထ၍ တော်လှန်ရခြင်းဖြစ်သော်လည်း အာဏာကို လုံးဝမက်မောသူမဟုတ်ပါချေ၊ ထို့ကြောင့် မူးမတ်တို့လက်သို့ အာဏာကို အပ်ကာ သင့်တော်သောသူအား ထီးနန်းလွှဲအပ်ဖို့မှာကြားပြီး တောထွက်၍ အသက်ထက်ဆုံး ရဟန်းပြုသွားလေတော့သည်၊ သြော်…………ရှာမှရှားတဲ့ မြင့်မြတ်သော မင်းကြီးရန်နောင် ပါ.တကား။
မိမိတို့ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ဘ၀တည်းက သင်ယူခဲ့ရသော သိုဟန်ဘွား၏ အကြောင်းသည် နောင် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဘယ်သောအခါမှပေါ်ပေါက်တော့မည် မဟုတ်ဟု အစွဲအမြဲ ယုံကြည်မှတ်ယူခဲ့မှာ ယခုအခါ မှာလေစွ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာပြည်သည် လွတ်လပ်သော တိုင်းပြည်ဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် အုပ်ချုပ် နေသောကြောင့်ပင် စိုးစဉ်းမျှပင် မထင်ထား မမှတ်ယူခဲ့ အတွေးအမြင် တက်တက်စဉ် အောင်ပင်လွဲခဲ့ရ ၊ မြန်မာပြည်သည် အင်္ဂလိပ် လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ခဲ့သည်မှာ မှန်သော်လည်း ၁၉၆၂ နှစ် မတ်လ (၂) ရက်နေ့မှစ၍ စစ်တပ်၏ ကျေးကျွန်ဘ၀သို့ လုံးလုံးလျားလျား ရောက်ရှိ သွားခဲ့ရပြီး ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ဆင်းရဲ မွဲတေကာ ပါးစပ်ပိတ်၊ မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်ခံထားခဲ့ရသည်မှာလည်း ယနေ့ ထိအောင်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်လူတန်းစားပေါ်ပေါက်လာပြီး ပြည်သူလူထုမှာ စစ်တပ်၏ အဖိနှိပ်ခံ၊ အနင်းခံ နင်းပြားဘ၀သို့ရောက်ရှိသွားရသည်။
ယခုလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေသော သံဃာတော်များ၏ ပရိတ်ရွတ် မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်နေခြင်းများ အပေါ် မောင်းပြန်စက်သေနပ်များဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်များသို့ ညအချိန်မတော် လုံးဝကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ရှေ့တန်းရန်သူ့ စစ်စခန်းကို ၀င်စီးနင်းသည့်နှယ် လေးဘက်လေးတန်မှ ၀ိုင်း၍ညာသံပေးကာ ၀င်လာကြပြီး တွေ့သမျှဆရာတော် သံဃာတော်တို့ သေနပ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်တွင် တစ်ခါမှ မကြားဘူးသော နအဖ၏ လက်ကိုင်ဒုတ် ကြံ့ဖွတ်နှင့် စွမ်းအားရှင်တို့က ရဲတင်းများနှင့် သံဃာတော် များအား ၀င်ရောက်၍ ထိုးခုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း များကို တောင်ဥက္ကလာပ ငွေကြာယံ ပရိယတ္တိစာသင် တိုက်ကို ၀င်စီးခဲ့ရာတွင် ထင်ထင်ရှားရှားပြုလုပ်သွားခဲ့ကြသည်၊ အင်တာနက် ပေါ်တွင်တွေ့ရသော သတင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများအရ မိမိတို့ သိရခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆန္ဒပြနေသူများကိုလည်း သွေးအေးအေးဖြင့် နောက်ကျောဘက်မှနေ၍ အနီးကပ်ကာ ပစ်သတ်သွားပုံများမှာလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိပင် ဖြစ်တော့သည်၊ မိမိတို့ ကိုးကွယ်နေ သော မြတ်စွာဘုရားတရားတော်များကို မပျောက်မပျက်ရအောင် ထိမ်းသိမ်းနေကြသော သံဃာတော်များအား ထိုကဲ့သို့ မယုံကြည် နိုင်လောက်စရာကောင်းအောင် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်သွားကြပုံကို မြင်ရ ကြားရသောအခါ ခေတ်ဟောင်းက သိုဟန်ဘွားထက် ဆိုးသော ခေတ်သစ်သိုဟန်ဘွား ယခုတော့ ငွားငွားငွင့်ငွင့်ကြီးကို ဘီလူး သရဲသဘက်ကြီးပမာ ပေါ်ပေါက်နေပါရော့လား ဟု အောက်မေ့မိပါတော့သည်။
ယခုလိုသံဃာတော်များအား ရက်ရက်စက်စက် လက်ရဲ ဇက်ရဲ သတ်ဖြစ်ရဲသော ဗိုလ်သန်းရွှေ အမှူးပြုသော စစ်ဗိုလ်များက မြန်မာပြည်ကို ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဟု ကြွေးကြော်ကြပြီး နိုင်ငံတကာကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ကြေညာခဲ့ကြသည်၊ သာသနာပြု တက္ကသိုလ်ကြီးများလည်း ထူထောင်ခဲ့ကြသေးသည်၊ ပြီးတော့ သာသနာပြု သံဃာတော်များကိုလည်း လွှတ်နေသည်၊ ထိုကဲ့သို့ လူနှင့်မတူ ဘီလူးနှင့်တူသော သူများက လွှတ်သော သာသနာသည်လည်း ဘယ်နိုင်ငံကမျှ အထင်ကြီး လိမ့်မည်၊ လက်ခံကြလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ၊ အထူးသဖြင့် ယခုဆယ်စုနှစ် အတွင်းတွင်မှ အနောက်နိုင်ငံ များတွင် ခေတ်စားစပြုလာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာကာ မြန်မာလူမျိုးနှင့် နိုင်ငံကိုလည်း အထင်ကြီး လေးစားလာကြသော အနောက်တိုင်းသားများသည် မယုံကြည်နိုင်လောက် အောင်ပင် အံ့သြ သွားကြလေတော့သည်။
အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံ၊ ပြီးတော့ ပိဋကတ်သုံးပုံကို အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေ ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံ၊ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမူရင်းကို ယခုထက်ထိ ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ စစ်တပ်က ဘာဖြစ်လို့ သံဃာတော်တွေကို ယခုလို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရတာပါလဲ ဟု မေးမြန်းလာကြသည်။
လူလိမ်ဆိုသည်မှာ မိမိဇာတိုရုပ်ကို ဘယ်သောအခါမျှ တာရှည်လိမ်၍မရချေ၊ ကြာတော့ အလိမ်ပေါ်လာသည်သာ ဖြစ်စမြဲမို့ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့၏ မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားသော မျက်နှာ များသည် အထင်းသား အရှင်းသား ဘွားကနဲပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပေသည်၊ ဘာကြောင့် ဒီလို မိမိတို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေတဲ့ သံဃာတော်များ မေတ္တာသုတ် နှင့် မောရသုတ်များ ရွတ်ကာ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူတို့ အခွင့်အရေးများ ရရှိရန်အတွက် တောင်းဆိုလာသည်ကို စားပွဲဝိုင်းတွင် ထိုင်၍ ဆွေးနွေးရမည့်အစား မောင်းပြန်စက်သေနတ်များဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့ ရပါသလဲလို့ ယဉ်ကျေးသည့် ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားများက မိမိတို့ အားမေးမြန်းလာကြပြီ်။
ယနေ့တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေသော ဗိုလ်သန်းရွှေခေါင်းဆောင်သည့် သူခိုး ဒါးပြအုပ်စုသည် မိမိတို့ တသက်တာတွင် ဘယ်တုန်းကမျှ မခံစား ခဲ့ရသော စည်းစိမ်ချမ်းသာများကို ခံစားနေရသဖြင့် ရရှိထားသော အာဏာကို မလွတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် နှမ်းတစေ့မျှ လုပ်ပေးလိုသော ဆန္ဒလုံးဝမရှိသည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်တော့သည်၊ အများပြည်သူတို့က ငတ်ပြတ်မွဲတေနေပြီး နိုင်ငံတကာသို့ သွား၍ ကျွန်ခံနေရချိန်၊ အမျိုးသမီးများ အများစုက ပြည့်တန်ဆာ အဖြစ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ရောင်းစားခံနေရချိန်မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေအမှူးပြုသော စစ်ဗိုလ်အုပ်စုက စိတ်ကူးယဉ်နေပြည်တော် ဆိုသည်ကို တောကြီးမျက်မဲထဲတွင် သွား၍တည်ဆောက်ခြင်း၊ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးများကို ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဂေါက်ကွင်းကြီးများကို တည်ဆောက်ထားကြခြင်းတို့ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ် မှာ မည်သည့် အစိုးရကမှ မလုပ်ခဲ့ကြသော၊ မလုပ်ရဲခဲ့ကြသော ကိုယ်ပိုင်မြို့တည်နေထိုင်သော အလုပ်မျိုးများကိုလုပ်နေကြပြီး ပြည်သူလူထုကိုတော့ ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက် နက်စေကာ စစ်တပ်၏ကျေးကျွန်အဖြစ် သွတ်သွင်း၍ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဇာတ်ခင်းနေကြသည်မှာ အာဏာကို မက်မောပြီး အာဏာရူးတွေ ဖြစ်နေလို့ ပင်မဟုတ်ပါလား ဟုဖြေကြားနေရ ပါတော့သည်။
ပြည်သူများအား အငတ်ထားကာ သူတို့ကိုယ်တိုင်က မြန်မာရှင်ဘုရင်များပင် မခံစားခဲ့ဘူးသော အခိုက်တန့် စည်းစိမ် ချမ်းသာများကို ခံစားနေကြသဖြင့် အာဏာ လက်လွှတ်ဖို့ ဆိုတာကို အိပ်မက်မျှတောင် မက်ကြမည်
မဟုတ်ချေ၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုသော အတွေးအခေါ်ဖြင့် စစ်တပ်လူတန်းစားတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်း လာလျက် ရှိနေရာ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတို့အဖို့ နီးရာဓားဆွဲ၍ ထတော်လှန်ဖို့ မှအပ အခြား ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ပေ။
ယခုဖြစ်ပွားပြီး ဖြစ်ပွားဆဲ ဖြစ်သော သံဃာများကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းခြင်း မျိုးသည် သမိုင်းတွင် မကြုံဘူးသော ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ရာ သည် မြန်မာပြည်သူများ အနေနှင့်သော် လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့ပြည်သူများ အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဘယ်သောအခါမှ မေ့ပျောက်၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ပဲ ‘ကမ္ဘာကျေသော်လည်း ဥဒါန်းကား ဘယ်သောအခါမှ ကျေလိမ့်မဟုတ်ပါပေ’။
ယနေ့တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေသည့် ဗိုလ်သန်းရွှေသည် သိုဟန်ဘွား နှင့် ရက်စက်ပုံ ရက်စက် ချင်း သတ်ဖြတ်ပုံ သတ်ဖြစ်ချင်း တထေရာတည်း ဖြစ်ပါတော့သည်၊ သံဃာကို စော်ကားရဲသည် ဆိုသည်မှာ တော်တော်တန်တန် မိစ္ဆာဒိဌိ အယူရှိယုံနှင့် မပြုလုပ်ရဲချေ၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ အနေနှင့် အလွန်တရာ နက်ရှိင်းသော မိစ္ဆာဒိဌိ အယူရှိနေ၍သာ သံဃာတော်များကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ရဲခြင်းဖြစ်သည်၊ အကုသိုလ်ဆိုတာ အကျိုးမပေးသေးခင်တော့ လူမိုက်များအဖို့ ပျားရည်လို ချိုမြ နေပေလိမ့်မည်၊ အကျိုးးပေးချိန် တန်ပြီးဆိုရင်တော့ ပျားရည်ဘ၀မှ သံပူရည်ဘ၀သို့ရုတ်ချည်း ပြောင်းသွားမည် ဖြစ်ပေသည်၊
အာဏာတည်း ဟူသောအကြောင်းတစ်ခု တည်းကြောင့် လူပေါင်းများစွာကို ထောင်သွင်းအ ကျဉ်းချထားခြင်း၊ ပြည်သူတို့ရဲ့ နား၊ မျက်စိ၊ ပါးစပ်များကိုပိတ်ထားကာ မိမိတို့ စိတ်ကြိုက်ထင်သလို မြန်မာပြည်သူ လူထုအပေါ် နှိပ်စက် ကလူပြုနေခြင်းသည် မှာလည်း ရာစုနှစ်တစ်ဝက်မျှ ရှိလာပြီဖြစ်၏။
မြန်မာပြည်သူတို့ အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သော အခွင့်အရေး တခုရှိနေပါသည်၊ ထိုအခွင့် အရေးမှာ စစ်အစိုးရ နှင့် ၄င်းတို့၏ လက်ဝေခံ ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်များ ပိုင်ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လေယာဉ်ပျံ၊ ကား၊ ရထားစသည်များကို မ၀ယ်ယူ မသုံးစွဲခြင်းဖြင့် သပိတ်မှောက်နိုင်ပါသည်၊ မနှစ်မြို့ ကြောင်းကို ပြနိုင်ပါသည်။
မြန်မာပြည်သူ လူထုအနေဖြင့် ယနေ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးချယ်ရမည့် လမ်းနှစ်သွယ်သို့ ရောက်ရှိနေပေသည်ီ၊ အဲဒါကတော့ “စစ်အစိုးရရဲ့ အဖိနှိပ်ခံ အဆင်းရဲခံ ကျွန်ဘ၀ နှင့် နေကြမလား၊ ကျွန် ဘ၀က လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အသေခံ တိုက်ပွဲဝင်ကြမလား” ဆိုတဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ကို ရွေးကြရတော့မှာဖြစ်ပါသည်၊ တစ်ဘ၀မှာ တစ်ခါပဲသေကြရတာမို့ သေမှာကို မကြောက်ကြပဲ ဆက်လက်တိုက် ပွဲဝင်သွားကြဖို့ နှိုိုးဆော်ရသည်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ (၁၉၃၆) ပြည့်နှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရဟန်းပျိုများ ခေါင်းဆောင်ကာ တော်လှန်ရေးကြီး တခု ဆင်နွဲ ခဲ့ကြပါသည်၊ နောင်တွင် ထိုသံဃာတော်များသည် မန္တလေးတွင် စုရုံကြပြီး မန္တလေးမြို့ တောင်ပြင် ထီးလင်း တိုက်မဟာအုဌ်ကျောင်း လေးပြင်လေးရပ်လုံးဆိုင်ရာ သံဃာတော်များဦးစီး၍ “( All Burma Yahanpyo League ) မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ချုပ်ကြီး” ကို အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် တိုင်းပြည်အကျိုး ပြည်သူလူထု အကျိုးအတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြလေသည်၊ ထိုစဉ်က ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြသော သံဃာတော်များမှာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၂၀ ကျော်သာသာ သုံးဆယ်တွင်းမှာ သာဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်။
၁၉၃၆ (၁၃၀၀) ပြည့်အရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာသော အခါ မန္တလေးမြိှု့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ချုပ်မှ ကြီးမှူးကာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်အောင်ကျော် အင်္ဂလိပ်လက်ချက်ဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရခြင်းအတွက် မန္တလေးမြို့တွင် အကြီးအကျယ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြရာ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ချုပ်မှ သံဃာတော် (၇) ပါးနှင့် ကျောင်းသား၊ မိဘပြည်သူ (၁၀) ဦး စုစုပေါင်း အာဇာနည် (၁၇) ဦးတို့ကျဆုံးခဲ့ရပေသည်၊ သွေးမြေကျသော နေရာမှာ မန္တလေးမြို့ အနောက်တောင် ကျူံးဒေါင့် လမ်း(၈၀)နှင့် (၂၆) ဘီလမ်းတို့ဆုံရာ ထောင့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်၊ ဆန္ဒပြသူများမှာ သံဃာတော်များက ဦးဆောင်၍ဈေးချိုတော် အနောက်ဘက်ရှိ မဟာ ဝေယံဘုံသာတိုက်ကျောင်းမှ ချီတက်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်၊ ထိုသို့သံဃာတော်များ သွေးမြေကျခဲ့ရခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က တိုင်းတစ်ပါသားတို့ အုပ်ချုပ်နေချိန် ဖြစ်သဖြင့် ကိုယ့်လူမျိုး မဟုတ်သည့် အတိုင်း ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ် ခဲ့ခြင်းကို ဘယ်လိုမှ ပြောဆိုဘွယ်ရာမရှိသော်လည်း ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသော၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းမှာ ကိုယ့်လူမျိုး စင်စစ်များက တိုင်းတပါးသား နယ်ချဲ့ များထက် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ရဲကြသည်မှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်စရာပင် ဖြစ်ပါတော့ သည်။
စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့ဘက်မုခ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူများ၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မှုများအား နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် စစ်တပ်များမှ မောင်းပြန်သေနတ်များဖြင့် ရက်စက်စွာ ဖြိုခွင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်းကိုကမ္ဘာ့မီဒီယာများတွင် မြင်ရသော အခါ မိမိ၏ မျက်စိနှင့်နားကိုပင် မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ထိုနေ့က အစာပင်စားလို့ မရတော့ချေ၊ တစ်ကိုယ်လုံး အသားများတဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ ဗုဒ္ဒဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သော နိုင်ငံမှာ ဒီလောက်တောင်မှ ရိုင်းစိုင်းရက်စက်လေကြသလားဟုလဲ ရင်ထုမနာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရန် အမိန့်ပေးစေခိုင်းခဲ့ကြသော သူများသည် သူရဲဘော အလွန်ကြောင်သောသူများ ဖြစ်ကြ သည်ကို သတင်းများတွင် အထင်းသားမြင်ကြရသည်၊ သူများကို ပစ်ခတ်ရဲ ကြပေမယ့် မိမိတို့ကိုယ်ကိုတော့ ဒိုင်းများဖြင့်လည်း ကောင်း၊ သစ်ပင်များတွင် အကာအကွယ်ယူလည်း ကောင်း နေနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့သည် ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် သံဃာတော်များ ကိုယ့် လူမျိုးများ၏ လက်ချက်ဖြင့် သွေးစွန်းခဲ့ရသော တတိယအကြိမ်လည်းဖြစ်ပေသည်၊ ဇာတ်တူသားကို စားခဲ့ကြသော မြန်မာ့အာဏာရူးတပ်မတော်၏ သွေးစွန်းသော နေ့လည်းဖြစ်သည်၊ မိမိတို့ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်အလေးအမြတ်ပြုနေသော သံဃာတော်များအား ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ရဲသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အလွန်အောက်တန်းကျသော လုပ်ရပ်ကိုလည်း စက်ဆုပ်ရွံရှာမိသည်။
စက်တင်ဘာ (၂၆) ရက်နေ့ကို သံဃာတော်များနေ့ အဖြစ် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးက သတ်မှတ်ကြ၊ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့သည် မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးခံစားနေရသော အထွေထွေ ဆင်းရဲဒုက္ခများမှ ကင်းလွတ်စေရန် သံဃာတော်များက ဦးဆောင်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ မိမိတို့၏ဆန္ဒများကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်၊ ထိုသို့ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သည်ကို အာဏာရူး ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ သူခိုးဒါးမြ စစ်အုပ်စုက လက်နက်မပါ ဗလာချည်းသက်သက်ဖြစ်သော သံဃာတော်များအား မောင်းပြန်သေနပ်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ဘင်းနက် (လှံစွတ်တပ်ဒါး) ဖြင့်ထိုးသတ်ခြင်း၊ သံပြားကွပ်ထားသော ဒုတ်များဖြင့် ရိုက်သတ်ခြင်း၊ မကြားဝံ့ မနာသာ ဆဲရေး တိုင်းထွာခြင်းတို့ လက်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်၊ ထို့ကြောင့် စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့ကို ပြည်သူများအတွက် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့ကြသော သံဃာတော်များကို ဂုဏ်ပြု သတိရသော အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သံဃာတော်များနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးကြပါရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအား တောင်းဆိုလိုက်ချင်သည်။
သိုဟန်ဘွားက အများပြည်သူတို့ ကိုးကွယ်နေကြသော သံဃာတော်များကို မြန်မာသက္ကရာဇ် (၈၈၈) ခုနှစ်တွင် ယခု ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ အုပ်စုကဲ့သို့ ရက်စက်စွာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်လိုက်သောအခါ ဗမာဘက်မှ မင်းခစား အကြီးအကဲ မင်းကြီးရန်နောင်က သိုဟန်ဘွားအား သုတ်သင်ရှင်းလင်း၍ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကယ်တင်ခဲ့သလို ယခုအချိန်အခါမှာလည်း သာသနာတော်ကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကိုလည်းကောင်း သုညအဆင့်သို့ ရောက်သွားအောင် ဖျက်ဆီးနေပြီး ခံစားမှုမျက်နှာမရှိ ရိုင်းစိုင်းရုပ်မာပြီး စည်းစိမ်ယစ်မူး နေကြသော တစ်ကိုယ်ကောင်းသမား ဗိုလ်သန်းရွှေအမှူးပြုသော ဒါးပြသူခိုး စစ်အုပ်စုတို့အား သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန် ခေတ်သစ် မင်းကြီးရန်နောင် ပေါ်ပေါက်ရန် အချိန်တန်ပြီဟု ထင်ပါသည်။
အို…….သာသနာကို ကိုးကွယ်မြတ်နိုးသော ပြည်သူကို ချစ်သော တပ်ဗိုလ်တပ်သား အပေါင်းတို့ မိမိတို့ ကိုးကွယ်အထွတ်အမြတ်ထားသော ဘာသာ၊ သာသနာကို စော်ကားရဲသော ခေတ်သစ်သိုဟန်ဘွား စစ်အုပ်စုအား မိမိတို့ တတ်နိုင်သော နည်းဖြင့် တွန်းလှန်ကာ ခေတ်သစ် မင်းကြီးရန်နောင်ဘွဲ့ကို ယူကြပါဟု တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါရဲ့။
ဒီအကြောင်း ရေးချင်နေတာကြာပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ထဲက ကြိတ်ပေါက်ကွဲနေတာထက်စာရင် စာရေးပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်တာ ကောင်းမယ်ထင်လို့။ အချိန်တွေနဲ့ နပန်းလုံး နေရတာနဲ့ မရေးဖြစ်တာ။ ဟိုတနေ့ကတော့ ဆရာမဒေါ်မေငြိမ်း ဘလော့ကို သွားရင်း တခုလပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ ရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရတော့ ရင်ထဲက သံစဉ်တွေက ပြည့်လျှံ ထွက်လာတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ရအောင်ယူပြီး ရေးမှဖြစ်တော့မယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်မတခုလပ် တယောက်ပါ။ ကြော်ငြာနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူဆိုတာကို ကုန်ပစ္စည်းလို သတ်မှတ်တာကို ကျွန်မ အရမ်းမုန်းပါတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတာ ရောင်းကုန်လို့ ရှေးလူကြီးတွေက ဆိုတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်မနဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကြော်ငြာတာ မဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုရတာပါ။
ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စာနာစိတ်တို့၊ အကြင်နာတရား စတာတို့တွေက အခြေအနေချင်းတူသူတွေအပေါ်မှာတောင် ခွဲခြား၊ ခွဲခြား လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ လင်ယောက်ျား မရှိတာချင်းတူတူ မုဆိုးမ ကျတော့ သနားပါတယ်တဲ့။ တခုလပ်ကျတော့ သူကတခုလပ်နော်၊ သတိထားတဲ့။ တကယ်ဆို မုဆိုးမတွေ ဘ၀က၊ မလွဲသာမရှောင်သာ တခုလပ်ဘ၀ ရောက်ရတဲ့ မိန်းမတွေထက် အများကြီး သာပါတယ်။ သူ့ယောက်ျားသာ တစ္ဆေသရဲ မဖြစ်သွားဘူးဆိုရင် ဘ၀ထဲက အပြီးတိုင် ထွက်သွားတာပါ။ ပြန်မပေါ်လာပါဘူး။ တခုလပ်တွေကျတော့ ဘ၀ထဲက အပြီးတိုင် မထွက်ကြပဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အနှောင့်အယှက် ပေးတတ်ကြပြန်တယ်။ ပစ္စည်းခန်းတွေ၊ တရားရုံးတွေ၊ မတွေ့ချင် မမြင်ချင်ပါဘူးဆိုမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်စပ် ပတ်သက်နေရတာတွေ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးမှုတွေ၊ သားရေး သမီးရေး ကိစ္စတွေနဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ်ကြရတော့တာပဲ။ ဒီကြားထဲ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုတာကလဲ နူရာဝဲစွဲ ဆိုသလို လဲကျနေသူကိုမှ ဂုတ်ခွစီးပြီး လည်ပင်း ညှစ်ချင်ကြသေးတယ်။ မိန်းမတယောက်ရဲ့ သိက္ခာနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုလ်လုပ်ချင်ကြသေးတယ်။
တကယ်ဆို ကျွန်မနဲ့သူ လမ်းခွဲကြတဲ့ ကိစ္စက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ ဘယ်လိုမှ မတူညီနိုင်တော့လို့ လမ်းခွဲလိုက်တာပါ။ ပမာဆိုရရင် ခရီးတူတူ သွားကြတယ်ရှင်။ ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီး လုံးဝမတူညီတော့ဘူး။ မတူညီတဲ့ခရီးကိုလဲ ကျွန်မဆက်မလိုက်နိုင်ဘူး။ “သျှောင်နောက် ဆံထုံးပါ” ဆိုရအောင် ကျွန်မမှာလဲ ဆံထုံးမရှိဘူး။ သူ့မှာလဲ သျှောင်မရှိဘူး။ ဒီတော့ ၂၁ရာစုခေတ်ကို ၂၁ရာစု အတွေးအခေါ်နဲ့ပဲ ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တယ်။ အဲ- ၁၃ရာစုခေတ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မလဲ ၁၃ရာစု အတွေးအခေါ်နဲ့ပဲ ဆုံးဖြတ်မှာပေါ့။ ဒါကိုမှ ဓလေ့၊ ထုံးစံအရတွေ လာပြောနေသူတွေက ခပ်များများ။ ခက်တာက လာပြောနေသူတွေက ထိုင်မသိမ်း အကျီင်္ဝတ်၊ ဆံထုံးလေးတွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ အနည်းငယ် စဉ်းစားမှာပေါ့။ သူတို့ကျတော့ ဆံပင်တိုနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ၀တ်ပြီး၊ ဒီဆံထုံးကိစ္စကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် လာလုပ်နေတာကျတော့ ကျွန်မလည်း ပေါက်ကွဲချင်လာတာပေါ့။
သူနဲ့ ကျွန်မ ဆုံခဲ့ကြတာက အဖွဲ့အစည်း တခုတည်းမှာပါ။ ရင်းနှီးပြီး မိတ်ဆွေဖြစ်လာတော့ တဆင့်တက်တယ်။ ချစ်ခွင့်ပန်တယ်ပေါ့။ သူ့ရဲ့မွေးနေ့က ကျွန်မရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျောက်ဆုံးနေသော ချစ်သူလေးနဲ့ တထပ်တည်း ကျနေတာမို့ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ နောက်တော့ သူက လက်ထပ်ဖို့ လောတယ်။ ကျွန်မကလဲ ကျောင်းပြီးတယ် ဆိုတာကို ပါရဂူဘွဲ့ရတာလို့ ခံယူထားသူဆိုတော့ မရမချင်း လက်မထပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ အလုပ်ခွင်မှာလဲ ကျွန်မက Level3အရာရှိပဲ ရှိသေးတာ။ Level 4/ Level5ရာထူးကို ဆက်ကြိုးစားရဦးမယ် ဆိုတာ ရှင်းပြထားတယ်။ စေ့စပ်ထားကြဖို့ သဘောတူလိုက်ကြတယ်။ လူတယောက်နဲ့ တယောက် ပေါင်းစပ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှမဟုတ်တာ။ ဘ၀ခရီးတခုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူဖြတ်သန်းကြရမှာ။ ဒါကြောင့်လဲ တယောက်ကို တယောက် အချိန်ယူလေ့လာညှိနှိုင်းကြဖို့ ချက်ချင်းလက်ထပ်စရာ မလိုသေးတဲ့ စေ့စပ်ပွဲဆိုတာ ပေါ်လာတာပေါ့။
ဒါပေမယ့်လဲ အခြေအနေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲ စေ့စပ်ပွဲ မဟုတ်ပဲ လက်ထပ်ပွဲ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ဒီအထိက ပြဿနာ မဟုတ်သေးဘူးရှင့်။ ပြဿနာက စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ သူပြောလာတဲ့စကား။ သူ့ကို ရိုသေရမယ်တဲ့။ ကျွန်မကပြောပါတယ်။ လူအားလုံးကို ကျွန်မလေးစားတယ်။ ရိုသေတာကတော့ အနန္တောအနေန္တငါးပါးကိုပဲ ရိုသေတယ်လို့။ သူက ဆက်ပြောတယ်။ “သားကိုသခင်၊ လင်ကိုဘုရား“ ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးလားတဲ့။ လာပြန်ပြီ ဒီစကားလုံး။ ဒီစကားလုံးပြောတိုင်း နားကြားပြင်းကပ်လွန်းလို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရသူပေါင်း မနည်းတော့ဘူး။ ဒီစကားကို မိန်းမတယောက်ကပြောတာလား၊ ယောက်ျားတယောက်က ပြောတာလားဆိုတာ မသိရသေးသရွေ့ ကျွန်မလက်မခံနိုင်ဘူး။ ယောက်ျားဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်သူကြည့်ပြောမှာပဲ မဟုတ်လား။ အစဉ်အလာအရ ဆိုရင်လဲ ကျွန်မရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အသိဥာဏ်က လက်မခံနိုင်ပါ။ ရှေးက စာပေရေးသားသူတွေက မိန်းမတွေက ခပ်နဲနဲရယ်။ ယောက်ျားတွေက ပိုများသည်ကိုး။ “မိန်းမထက် ခွေးထီးက ပိုမြတ်တယ်“ဆိုတာလဲ ဒါမျိုးတွေကနေ ဆင်းသက်လာတာပေါ့။ ဒါကို လိုက်ပြောနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုလဲ အံ့သြမိတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ခွေးထီးလောက်မှ မမြတ်ပါဘူးဆိုတာ ကြွားစရာမို့ လိုက်ကြွားနေကြတာလား။ တကယ်ဆို ယောက်ျားတွေက ပြောလာရင်တောင် ခံငြင်းရမယ့် ကိစ္စ။ တရားတဘောင်တက်ရမယ့် ကိစ္စ။
ဒီကြားထဲ ရှိသေးတယ်။ “ကြက်မတွန်လို့ မိုးမလင်း” ဆိုတဲ့စကား။ မိုးလင်းတာ၊ မလင်းတာက သူ့သဘာဝနဲ့သူ၊ ကြက်တွန်တာ၊ မတွန်တာက သူ့သဘာဝနဲ့သူ။ ငါးတန်းလောက်ကတည်းက မိုးလင်းတဲ့ကိစ္စ အကြောင်း သိနေပြီးသားပဲ။ အစ်ကိုတွေ၊ မောင်တွေက ပြောနေရင် ဘာလို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြလဲ။ သီချင်းတွေထဲပါရင် ဘာလို့ လိုက်လက်ခုပ်တီး အားပေးနေကြလဲ။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ခွဲခြား စော်ကားနေတာတွေရှင့်။ ကျွန်မရှေ့လာပြောရင်တော့ ပြောတဲ့လူ တရားရုံးရောက်ပြီပဲ။
ဒီလိုနဲ့ သူလဲပြောပြီးရော၊ ကျွန်မတို့တွေ အနည်းငယ် ကတောက်ကဆ ဖြစ်ကြတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း ကျွန်မဘာမှ ဆက်ပြောမနေတော့ပါဘူး။ ငြင်းနေရရင် အချိန်ကုန်လို့။ အဲ- ဒီမှာတင် ပြီးသေးလားဆိုတော့ မပြီးဘူးရှင့်။ သူမိတ်ဆွေလာလည်တော့ စကားပြောဖြစ်ပြန်ရော။ သူတို့သောက်ရင်စားရင် အကြော်အလှော်လုပ်ပေးဖို့ စကားစသေးတယ်။ မကြားချင်ယောင် ဆောင်နေတော့မှ သူ့ဟာသူစကြော်တယ်။ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ တန်းတူ အလုပ်ခွဲဝေလုပ်ရမယ် သဘောပိုက်ပြီး သူလုပ်တော့လဲ ကျွန်မကူညီလုပ်ပေးပါတယ်။ ကဲ-အဲဒီတော့လဲ ပြီးသွားရော မဟုတ်လား။ ယောက်ျားတွေ စားရင်သောက်ရင် မိန်းမတွေက လုပ်ပေးရမယ်လို့ ဘယ်ဥပဒေကများ ထုတ်ပြန်ထားလို့လဲ။ တူတူလုပ်၊ တူတူစားပေါ့။ ဘီယာတွေကနေ ပုလင်းတွေဖွင့်ကြတော့ သူက ထပ်ဖောက်လာပြန်တယ်။ ၀ိုင်းမှာ စကားပြောရင် သူ့မျက်နှာကြည့်နေတဲ့။ သူ့ဆီက ခွင့်ပြုချက်မေးဆတ်မှ ဆက်ပြောတဲ့။ ရယ်စရာ အတော်ကောင်းတာပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်မ ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ပြောချင်တာတွေ ထိုင်ပြောနေတာကို အမြီးတွေထိုင်စားရင်း နားထောင်ပေးပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မိန်းမတွေကလဲ စကားနည်းနည်းပဲ ပြောပြီး၊ နားထောင်နေကြတော့ ဒီအချိန်မျိုးမှာ မိန်းမသင်းကွဲ အုပ်စုဖွဲ့လို့ကလဲ မကောင်းဘူး ဆိုတော့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ နားတွေက ဒီလိုကြာကြာနေဖို့ ခွင့်မပြုပြန်ဘူးရှင့်။ ကျွန်မအတော်လေးကို သည်းခံပြီး နားထောင်နေပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီအကြောင်းကို ပြောနေကြတော့ ကျွန်မ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ သူတို့ဟာ သူတို့ ပြောနေရင် တော်သေးတယ်။ သူက ကျွန်မဘက် လှည့်လှည့်ကြည့်ရင်း “ရှင်းလား၊ ရှင်းလား“ မေးတယ်ရှင့်။ လူတွေတဘက်သားကို စကားပြောရင် “နားလည်လား“တို့၊ “ရှင်းလား“တို့ ထည့်မပြောကြရင် ကောင်းမယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ တဘက်လူက ဘာမှန်းလဲမသိ ဆရာ သွားလုပ်နေတာနဲ့ တူလွန်းလို့။ ကြာတော့ နားညီးလာတာနဲ့ ကျန်တာတွေ အသာထား၊ အဲဒီ ဒီမိုနဲ့ ကရေစီရဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပဲ ပြန်ရှင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ ဘယ်ဘာသာစကားက ဆင်းသက်လာတယ် ဆိုတာတောင် မသိပဲနဲ့ ရှင်းလား၊ နားလည်လားလုပ်နေတာ တဆိတ်လွန်နေပြီ မဟုတ်လား။ ခပ်ကြောင်ကြောင်လုပ်နေတဲ့ သူတို့ကို ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိရအောင် အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာတခု တက်ထားဖူးတဲ့ ကျွန်မကလဲ သွားဖြီးပြလိုက်တယ်။ အဖြေကိုလဲ မပြောပြတော့ပါဘူး။ တော်ကြာ သူ့ကို လူကြားထဲ အရှက်ခွဲပါတယ်ဆိုပြီး လာပြဿနာရှာနေရင် နားဒုက္ခရောက်မှာ စိုးလို့။ သူတို့တွေ သိသိသာသာ စကားပြောင်းသွားတယ်ရှင့်။ ဟဲဟဲ- ၀ီစကီအကြောင်းပါ။ ပြီးသွားမလား အောက်မေ့ပါတယ်။ ပိုဆိုးလာရော။ ကျွန်မ စကော့တလန်မှာ အခြေချ နေထိုင်သူတယောက်ဆိုတာ သူမေ့သွားလား မသိပါဘူး။ အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ ဆက်ပြောနေပြန်ရော။ အကြောင်းအရာ တခုကို မသိပဲ ဖြီးနေရင် ကျွန်မသိပ်စိတ်ညစ်တတ်တာ ငယ်စဉ်ကတည်းက။ မသိဘူးပြောလို့ ဘယ်သူမှ အထင်မသေးပါဘူး။ ကျွန်မဆိုရင် သူတို့ အင်ဂျီနီယာဘာသာရပ်တွေကို လုံးဝကို မသိပါဘူး၊ မီးလုံးတပ်တာတောင် ၀ါယာရှော့ဖြစ်မှာစိုးလို့ ကိုယ်တိုင်မတပ်ပဲ၊ လူခေါ်တပ်ပါတယ် ဆိုတာ ကျွန်မပြောပြီးသား။ မသိလို့ မသိပြောတာ ရှက်စရာမဟုတ်။ ယောင်ဝါးဝါးပြောနေတာကမှ နားကြားပြင်း ကပ်စရာကောင်းတာ။ ဘာပဲပြောပြော ဒီတကြိမ်တော့ ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ တော်ကြာဝင်ပြောလိုက်ရင် မိန်းမနဲ့ အရက် ဘာဆိုင်လဲ ဆိုပြီး၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက တမျိုးထင်မှာစိုးလို့။ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာများ အဲလို၊ အဲလို။ တကယ်တော့ ဥရောပတိုက်က ကျောင်းသူကျောင်းသားမျိုးစုံနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူနေအတူစား ကျောင်းတက်လာတာ မသိပဲ နေပါတော့မလားရှင်။ ကျွန်မ သည်းခံနေလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ တခုခုသိနေပြီ။ သူနဲ့ ကျွန်မရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးမှာ အတော်ညှိနှိုင်းဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ တကယ်ဆိုးသွားစေတဲ့ ကိစ္စကတော့ ကျွန်မရဲ့ အလုပ်မှာ တိုက်ရိုက် ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မှုပါ။ ကျွန်မပါဝင်နေတဲ့ စာစောင်တခုတည်းက ရေးသားသူတွေ အကြောင်းကို စပ်စုလာတာပါ။ အဲဒီလူက နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးတာလား၊ ဘယ်မှာနေတဲ့လူလဲ၊ ဘယ်အဖွဲ့ကလဲ ဆိုတာတွေကို ကျွန်မ မကြိုက်ပါ။ အဖြေလဲ ပြန်မပေးပါ။ အဖွဲ့ထဲ ရောက်လာသူဆိုပေမယ့် စကားပြောကြည့်ရင် နိုင်ငံရေး ရေချိန် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်မခန့်မှန်းတတ်ပါတယ်။ အနီးကပ်ဖြစ်လာတော့ သူ့ရဲ့ commitment ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာ ကျွန်မ ပိုသိလာရပါတယ်။ နောက်ဆုံး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဖြစ်နေသည်ထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက သပ်သပ်စီမို့ ပြောစရာမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ သိက္ခာကို ယုံကြည်လို့ နာမည်ဝှက်နဲ့ ရေးပို့နေသူတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ တတိယလူဆီ အရောက်မခံနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ခင်ပွန်းဖြစ်တာက ဖြစ်တာတခြား။ အဲလို ဆိုပြန်တော့ သူက ထိုသူများနဲ့ ကျွန်မကို စွပ်စွဲ ပြောဆိုပြန်ပါတော့တယ်။
ဒီနည်းနဲ့ မရပြန်တော့ ကျွန်မကွန်ပျူတာကို ကြည့်ခွင့် တောင်းဆိုပြန်ပါတော့တယ်။ အဲဒီတုန်းက စေ့စပ်ပွဲပြီးရင် ဥရောပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ညီလာခံကို သွားတက်ရမှာမို့ရယ်၊ ပြီးတာနဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်က ရောင်နီဦးစာသင်ကျောင်းမှာ လုပ်အားပေး (၃)လ သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပြီးသားမို့ ကွန်ပျူတာက ကျွန်မနဲ့ တပါတည်း ပါသွားပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဘဏ်ကလဲ ဌာနချုပ်နေရာ အပြောင်းအလဲမို့ Functions များကို တခြားမြို့က ဌာနခွဲတခုက တာဝန်ယူ လုပ်ပေးနေချိန်မို့ ကျွန်မတို့တွေအားလုံးကို လစာပြည့် ခွင့်ရက် ပေးထားတာကြောင့် ကျွန်မအနည်းငယ် အားလပ်နေတဲ့ အချိန်ပါ။ ကွန်ပျူတာကြည့်ခွင့်ကို အသည်းအသန် တောင်းဆိုနေတော့ သူမရှိတုန်း အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို USB ထဲ ပြောင်းထည့်ပြီးမှ ကြည့်ခွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းအရာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရဲ့ပေါ့ဆမှုကြောင့် ရဲဘော်တယောက် မထိခိုက်စေရပါ။ လိုအပ်ရင် အသက်နဲ့ လဲရမယ့် ကိစ္စပါ။ သူလဲအတိုက်အခံကပဲ ပြောစရာရှိပါတယ်။ မြေပေါ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မထင်ရှားရင်တောင် အတင်းထင်ရှားအောင် လုပ်ယူနေရတာမို့ ကိစ္စမရှိပါ။ မြေအောက်ကျတော့ ကိုယ့်ကလာဘ်စည်းနဲ့ကိုယ် လှုပ်ရှားကြရတာပါ။ FBE ညီလာခံနဲ့ ရောင်နီဦးကိစ္စကိုတော့ သူက အသည်းအသန် တားမြစ်နေတာကြောင့်၊ အခုယူ၊ အခုကွဲဖြစ်ရင် မကောင်းဘူးဆိုပြီး ကျွန်မ လျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ကွာရှင်းစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးချင်နေလိုက်တာ၊ အသည်းကို ယားနေတာပဲ။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ သူက နောက်တဆင့်တက်လာပြန်ပါတယ်။ ကျွန်မ ရေးနေတဲ့စာစောင်ထဲမှာ သူ့နာမည်နဲ့ ရှဲဒိုး ရေးပေးရမယ်တဲ့။ ကျွန်မ စာရေးတယ်ဆိုတာက ၀ါသနာပါလို့ကို ရေးနေတာပါ။ စာရေးဆရာ တယောက်လဲ မဟုတ်သေးပါ။ စာရေးနေသူ တယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကိုတော့ ကျွန်မ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ငြင်းရပါတယ်။ သူက လက်မလျှော့သေးပါ။ အင်္ဂလိပ်ကဗျာတချို့ ထည့်ပေးဖို့ ပေးပြန်ပါတယ်။ ကျွန်မဆီမှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကောင်းတယ် ဆိုရမလား၊ ဆိုးတယ်ဆိုရမလားဆိုတဲ့ ကိစ္စတခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စာအုပ်တအုပ်ကို ဖတ်မကြည့်ပဲ လှန်လှော ကြည့်ပြီးပြီ ဆိုရင်ကို ဘယ်အကြောင်းအရာ၊ ဘယ်မှာ ပါခဲ့တယ်ဆိုတာကို မှတ်မိနေတဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကျွန်မကို google လို့ ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ရည်ညွန်းစာအုပ် လိုပြီဆိုရင် ကျွန်မကို ရှာခိုင်းလို့ ရတာမို့ပါ။ တခုခု ပြောလိုက်ပြီး၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်မကလဲ ဖတ်ထားဖူးတယ်ဆိုရင် အကြောင်းအရာကို မသိတော့ရင်တောင် ဘယ်စာအုပ်လဲ၊ စာအုပ်အစပိုင်းမှာလား၊ အလယ်ပိုင်းမှာလားစသဖြင့် ကျွန်မခေါင်းထဲ ပြန်ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်လဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ တခါတလေ နိုင်ငံရေးထဲမှာ လူတယောက် နာမည်ကြားတာနဲ့၊ ဒီလူဟာ ဘယ်အမှုတုန်းက လူထင်တယ်ဆိုတာ ပေါ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အခုလဲ ကဗျာတွေမြင်တာနဲ့ ဘယ်စာအုပ်ထဲက ဆိုတာ ကျွန်မသိနေတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပိုင်းက ကျွန်မနဲ့ မဆိုင်ကြောင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာကို တိုက်ရိုက် ပို့စေလိုကြောင်း ပြောရင်း အသည်းအသန် လက်ရှောင်လိုက်ရပါတော့တယ်။
အဲ-ဘာလိုလိုနဲ့ (၁၀)ရက်လောက်ကြာလာတော့ ကျွန်မ အတော် စိတ်ပင်ပန်းနေပြီရှင့်။ တော်သေးတယ်။ နိုင်ငံမတူလို့ဆိုပြီးပဲ စိတ်ဖြေရတော့တယ်။ သူနေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်မနေတဲ့ နိုင်ငံက မတူတော့ ကျွန်မ ခဏ စိတ်သက်သာအောင် ကိုယ်နေနေတဲ့ တိုင်းပြည် ပြန်လာလို့ ရတာပေါ့ရှင်။ ကျွန်မနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ သူ့ကို ချက်ချင်း ခေါ်လာလို့ မရသေးတာကြောင့်၊ နောက်မှ ခေါ်ပါ့မယ်ဆိုပြီး နားချ ပြန်လာခဲ့ရတော့တယ်။ များမကြာခင်မှာပဲ ကျွန်မမှာ မျိုးဆက်သစ်လေး ရလာတော့မယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ သူ့ကို စိတ်ကုန်နေတာမှန်ပေမယ့် သည်းခံပြီး အဆက်အသွယ်လုပ်တာ လက်ခံနေရသေးတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်ဘ၀က သိပ်လွယ်လှတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာသာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ severe hyperemesis က ကျွန်မဆီလာဖြစ်ပါတယ်။ အပျော့စားနဲ့ အပြင်းစားရှိရာမှာ ကျွန်မက လူတသောင်းမှာ တယောက်ပဲရှိတဲ့ အပြင်းစားပါ။ နံနက်မိုးလင်းကစပြီး တောက်လျှောက် အန်တာဟာ ညဘက်အထိ ဘာစားစား ပြန်အန်ပါတယ်။ ရေသောက်ရင်တောင် ရေပြန်ထွက်တာမို့ ကျန်းမာရေးက အတော် ဆိုးဝါးပါတယ်။ ခဏခဏ ဆေးရုံသွား ဆေးသွင်းရပါတယ်။ အလုပ်က ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မမသွားနိုင်တော့ပါဘူး။ တော်ပါသေးတယ်။ စုဆောင်းထားတာတွေရှိလို့။ သူကလဲ ရရစားစားလို့ ဆိုနေတာမို့ သူ့ဆီကလဲ မတောင်းပါဘူး။ အလိုလေး၊ကိုယ့်ဘဏ်စာရင်းကိုတောင် သူနဲ့ joint ဖို့ပြောနေတာ ကျွန်မဆီကပါ ပြန်ပါသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။
ဒီလို အင်အားချိနဲ့ နေချိန်မျိုးမှာ သူ့ဆီက ဖုန်းတွေ နားထောင်နေရတာကလဲ ဒုက္ခတမှောင့်ပါပဲ။ ကျွန်မက ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို တာဝန်အလွန်ကျေချင်သူပါ။ ရုံးမှာတုန်းကဆို တခါတလေ ကျွန်မရုံးဆင်းချိန်ဟာ ည(၈)နာရီ နောက်ပိုင်းထိကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ နေမကောင်းပေမယ့် ကျွန်မတာဝန်ယူထားတဲ့ စာစောင် အပတ်စဉ် ထွက်ရေး၊ ပါဝင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ကျေပြွန်ရေးအတွက် ကျွန်မ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းမထူနိုင်လွန်းရင်တောင် အိပ်ယာထဲ လှဲရင်း အိပ်ပျော်သွားမှာစိုးလို့ ကွန်ပျူတာကို ရင်ဘတ်ပေါ် တင်ထားပါတယ်။ ကျွန်မကြောင့် လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးတာမျိုး လုံးဝ အဖြစ်မခံနိုင်တာမို့ပါ။ အဲဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာ သှူ့ဆီက ဖုန်းလာရင် ကျွန်မ သိပ်စိတ်ညစ်ပါတယ်။ အရေးပါစကားတွေဆိုရင်တမျိုးပေါ့။ အရေမရ၊ အဖတ်မရ စကားတွေ လာလာပြောနေတာ မပြီးနိုင်၊ မစီးနိုင်ဖို့ ဖုန်းကိုင်ရတဲ့ လက်တွေ ညောင်းပါတယ်။ စာဖတ်ချိန်တွေလဲ လျော့ကုန်တော့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလာဆွေးနွေးရင် ပိုစိတ်ကုန်ရ ပြန်ပါရော။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေးလောကထဲက လူတွေရဲ့ အတွင်းရေးတွေ၊ Background တွေ လိုက်မေးနေတာမို့ပါ။
ဒီအခြေအနေအတွင်းမှာပဲ ကျွန်မဆေးရုံကို (၃)ရက်လောက်တက်ရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အားဆေးတွေသွင်းရတာပါ။ စိတ်ကသာ တင်းထားလို့ ခိုင်နေပေမယ့် ရေမ၀င်၊ အစာမ၀င်တာကြာရင် လူဟာ လဲတတ်တာပါပဲ။ အဲဒီမှာ ကျွန်မဆီကို ဖုန်းလာပါတယ်။ သူ့ကို မြန်မြန်ခေါ်ဖို့ အကြောင်း။ သြော်-ငါ့ယောက်ျား ငါ့ကို ဂရုစိုက်ပါလားလို့ တွေးမိရုံရှိသေး၊ သူဆက်ပြောတဲ့စကားက “ကိုယ်လဲ မနေနိုင်တော့ဘူးမျိုးရဲ့“တဲ့။ ဘာပြောတာလဲဆက်မေးတော့ “ယောက်ျားဆိုတာ အကြာကြီး ပစ်မထားရဘူး။ ကိုယ်က မိန်းကလေးတွေ စကတ်တိုတို ၀တ်ထားရင်တောင် စိတ်ထဲမှာ တမျိုးပဲ”လို့ ဆိုပါတော့တယ်။ အိပ်ယာထဲလဲနေတဲ့ ကျွန်မ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပါတော့။ လူချင်းသာ အပြင်မှာ တွေ့တာဆိုရင်တော့ ကျွန်မ လူသတ်မှုဖြစ်နေလောက်ပြီ။ တော်သေးတာက အင်မတန် တည်ကြည် ဖြောင့်မတ် သန့်စင်တဲ့ ချစ်သူ ယောက်ျားကောင်း တယောက်ကို ဆုံခဲ့ဖူးတာပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ “မဲမဲမြင်တာနဲ့၊ သရဲသရဲ အော်ကြတာလိုမျိုး၊ ယောက်ျားမြင်တာနဲ့၊ ——–အော်ပြီး ပြေးရမယ့်ကိန်း ဆိုက်သလိုမျိုးပါ။
အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး သင်တန်းတချို့ တက်ဖူးစဉ်က ခင်ပွန်းသည်တွေဟာ ဇနီးသည်တွေကို တခါတရံ Rape လုပ်တယ် ဆိုတာ ကြားရတော့ ကျွန်မမယုံခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ လက်ထပ်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာနဲ့ “ငါ့ဇနီးပဲ၊ ငါလုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရပြီ“ သတ်မှတ်လို့ မရပါ။ လူတိုင်းဟာ သူ့သွေးနဲ့ကိုယ်၊ သားနဲ့ကိုယ် ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ယောက်ျားတွေ ကာမဘီလူးစီးတိုင်း မိန်းမတွေက လိုက်လက်ခံပေးစရာမလိုအပ်ပါ။ ဆန္ဒမပါရင် ငြင်းခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါကိုမှ ရှေ့တိုးရင်တော့ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ယောက်ျားတွေအတွက် ဆိုရင်ရောလို့ မမေးပါနဲ့။ အခွင့်အရေး အတူတူပါပဲရှင်။ မိန်းမတွေ ကာမဘီလူး စီးလာရင်လဲ အလိုမတူရင် လင်ယောက်ျားဖြစ်သူက ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
အတော်ပင် ဒေါသထွက် စိတ်ကုန်နေတာဖြစ်ပေမယ့် ဒီအထိလဲ ကျွန်မ သည်းခံသေးတယ်ရှင့်။ အဲ- နောက်ဆုံးကျတော့ အဖြစ်အပျက် နှစ်ခုက ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့်ပေါ်လာပါတယ်။ ပထမတခုက တခြား တနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကျွန်မမိတ်ဆွေ အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ ဖုန်းကို သွားဆက်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျွန်မအမျိုးသားလို့ မပြောတဲ့အပြင် ကျွန်မကိုပါ အသိမိတ်ဆွေ ဆိုပဲ။ အဲ-သူမကိုလဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ မေးရုံမက သူ့ဆီလာပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်သေးသတဲ့။ ကိုယ်ရေးနောက်ခံတွေပါ သေချာလိုက်မေးနေတော့ ဟိုက ပျူးပျူးပျာပျာနဲ့ ဒီလူနာမည် ကြားဖူးလား ကျွန်မဆီ လာစုံစမ်းပါတော့တယ်။ ဒီအခြေအနေအထိ ဆိုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ သတိထားလာရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ယောက်ျား တခြားမိန်းကလေးဆီ ဖုန်းဆက်လို့ သ၀န်တိုတာမျိုးတွေကို ကျွန်မ မဆိုလိုပါ။ ကျွန်မဆီမှာ အဲဒီလို အားအားယားယား သ၀န်လိုက်ကြောင်နေသော စိတ်မျိုးလုံးဝ မရှိပါ။ အခုဟာက အခြေအနေပုံစံ တမျိုးကြီး ဖြစ်လာတာပါ။
တချိန်တည်းမှာ နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်တယောက် ရေးတဲ့ ရှစ်လေးလုံး မှတ်တမ်းတခုကို အမှတ်မထင် ပြန်ဖတ်မိတော့ သူ ကျွန်မဆီကို ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ပို့စဉ်ကရော၊ အဖွဲ့အစည်းထဲကို ၀င်စဉ်က ရေးထားတဲ့ သူ့နောက်ကြောင်း ရာဇ၀င်ကရောနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုကို ကျွန်မသွားတွေ့ပါတယ်။ သူပြောထားတာတွေနဲ့ တခြားစီပါ။ ကျွန်မ အိမ်ထောင်ဘက်ကို နိုင်ငံရေးသမားမှ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းမှလို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့တာမျိုး မရှိပါ။ သို့ပေမယ့် သူနဲ့တွေ့တော့ ဒီအချက်တွေကလဲ ကျွန်မရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ထောက်ကူပေးခဲ့တာအမှန်ပါ။
ရင်ထဲက သံသယကို ကျွန်မ ရေရှည် သိမ်းမထားပါ။ ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ် ချော့တခါ၊ ခြောက်တလှည့်နှင့် စစ်ကြောရေး ပြန်လုပ်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ကျွန်မ သံသယရှိသည့် အတိုင်းပါပဲ။ မည်သည့်အခါကမှ ထောင်ထဲမရောက်ခဲ့ဖူးပါ။ ကျွန်မတို့တွင်မက၊ အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံမှ လူများသာမက၊ သူ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ယူထားသော နိုင်ငံအစိုးရ ပါမကျန် ပိပိရိရိ အလိမ်ခံလိုက်ရတာပါ။ ဒေါသလဲထွက်၊ စိတ်လဲပျက်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ ဆိုတာတော့ သိဖို့လိုတယ် ထင်လို့ ဆက်စကားပြောနေမိတော့ သူက ကျွန်မကို ဘာတွေ ပြန်ပြီး စည်းရုံးသွားတယ် ထင်ပါသလဲ။ စစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့လို့ မိတ်ဆွေ ထင်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ။ လုံးလုံး မဟုတ်ရပါရှင်။ တကယ်လို့များ သူသာ နအဖဘက်တော်သား တယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ပူးကပ်ဝင်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်မှ ဒါဟာ စစ်တို့ရဲ့ သဘောသဘာဝပေပဲ ဆိုပြီး၊ ကျွန်မ ခွင့်လွှတ်လို့ ရဦးမယ်။ အခုများတော့ သူပြောသွားတာတွေကို အတိုချုပ်ရရင်-
(၁) ကျွန်မဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုလဲ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်၊ ဘယ်တော့မှ နိုဘယ်ဆုလဲရမှာ မဟုတ်လို့ အလကား အချိန် ကုန်ခံမနေနဲ့။ ကိုယ့်အကျိုးပဲကိုယ်ကြည့်။ ကိုယ့်မိသားစု ကောင်းစားရေးပဲ ကိုယ်ကြည့်တဲ့။
(၂) နိုင်ငံရေးနဲ့ လုပ်စားနေသူတွေအများကြီးပဲ။ သူတို့ရဲ့ ငွေဝင်ပေါက်တွေ၊ နိုင်ငံတကာရံပုံငွေတွေ ဘယ်လိုရနေလဲဆိုတာကို သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး နည်းရှာ။ ပြီးရင် ပြိုင်ပြီးလုတဲ့။
(၃) မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ရုံးခန်းဖွင့်ခိုင်းပြီး၊ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားတွေကို ဥရောပမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ အမြတ်တင် ခေါ်ရမယ်တဲ့။ (ဥပမာ- ကျောင်းလခက တစ်သောင်းဆိုရင် တစ်သောင်းခွဲ အပြီးအစီးဆိုတာမျိုး) ကျွန်မက ပညာရေးကိစ္စတွေ နားလည်တော့ ကျွန်မနာမည်နဲ့ဆိုရင် ဖြစ်ပါမယ်တဲ့။
(၄) ဥရောပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ဆွယ်တရားဟောပြီး၊ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တင်ခိုင်းရမယ်တဲ့။ တဘ၀လုံးစာဆိုတော့ ဒီကငွေ (၁၅၀၀)၊ (၂၀၀၀) ဆိုရင် လုပ်ကြမှာပဲတဲ့။ သူတို့အတွက် လုပ်ဇာတ်တွေကို ကျွန်မက ကြံဖန်ရေးပြီး၊ အဖွဲ့အစည်းခေါင်းစီးနဲ့ ထောက်ခံပေးရပါမယ်တဲ့။
(၅) ချမ်းသာဖို့၊ ငွေရဖို့ဆိုရင် ဘာမဆို လုပ်ရပါမယ်တဲ့။ ဘိန်းကုန်ကူးသင့်ရင်လဲ ကူးရမှာပဲတဲ့။
ကဲ-ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကြီးကို ကျွန်မက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ညှိနှိုင်း ပြုပြင်ပေးရမှာတဲ့လဲ။ ပြင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကျွန်မရဲ့ သိက္ခာတွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ ခံယူချက်တွေကိုပါ ထိပါးပွန်းပဲ့သွားမယ့် အဖြစ်။
နိုင်ငံရေး ဆိုတာကို နိုဘယ်ဆုရမှသာ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊ မြန်မာ့သမိုင်းတလျှောက်က တော်လှန်ရေးသမားတွေရဲ့ အရိုးတွေက တွန်ပြကြပါလိမ့်မယ်။ တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာက မတရားတာကို တွန်းလှန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူသိသိ၊ မသိသိ၊ ဘယ်သူ အသိအမှတ် ပြုပြု၊ မပြုပြု၊ ဘယ်သူဆုတံဆိပ်ပေးပေး၊ မပေးပေး တော်လှန်ရေးအသိ၊ တော်လှန်ရေးသတိနဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြရတာမျိုးပါ။ အလောင်းဘယ်မှာ မြှုပ်ထားခံရတယ် ဆိုတာတောင် ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ အညတရ တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့ သွေးစက်တွေသာ ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ဧရာဝတီ၊ သံလွင်၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်တောင်းတို့အပြင် နောက်ထက် သွေးမြစ်ကြီး တစင်းတောင် ပေါ်ပေါက်လာဦးမှာပါ။
နောက်တချက်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်စားသမားတွေ ဆိုတာကတော့ မရှိမဟုတ်၊ ရှိတာပါပဲ။ နိုင်ငံရေး သီအိုရီအရကို ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်မှာ အခွင့်အရေးသမား (opportunists) တွေ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ရှိတတ်တယ်လို့ ဆိုထားတာပါပဲ။ သူ့လမ်းနဲ့သူ၊ ကိုယ့်လမ်းနဲ့ကိုယ်ပါ။ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်သန့်ရင် ပြီးတာပါပဲ။
နောက်တချက်ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ လုပ်စားဖို့ ဆိုတာကိုလဲ ကျွန်မ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါ။ ကျွန်မက ပညာကို နှစ်နှစ်ကာကာကြီးကို တန်ဖိုးထားတာပါ။ မြန်မာကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းစရိတ်ကြီးစွာ ပေးကြရလွန်းလို့၊ စကောလားရှစ် အခွင့်အရေးတွေကို ကူရှာပေးနေတဲ့သူပါ။ မြန်မာတွေအများကြီး ပညာတတ်တွေ ဖြစ်တာကို ကျွန်မ အရမ်း မြင်ချင်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေး ပြီးသွားတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲကနေ ပြန်ဆွဲတင်နိုင်မယ့် တခုတည်းသောအရာဟာ ပညာရေးလို့ ယုံကြည် ထားတာမို့ပါ။ ပညာရေးနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတာရယ်၊ ပညာရေးကို လုပ်စားတာရယ်က ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးပမာ ကွာခြားလှပါတယ်။
အဲ-နောက်တချက်ကျတော့လဲ ကျွန်မ အလွန်မုန်းတီးတဲ့ အချက် ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သေချာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ တော်လှန်ရေးမှာ ပေးဆပ်သွားသူတွေကို သစ္စာဖောက်ခြင်း တမျိုးပါ။ ဥပဒေကြောင်းအရ ဆိုရင်လဲ နိုင်ငံတကာ လူကုန်ကူးမှုပါ။ နအဖမကောင်းတာက မကောင်းတာ သပ်သပ်၊ လူကုန်ကူးမှု ဒုစရိုက်မှု ကျုးလွန်တာက ကျူးလွန်တာ သပ်သပ်ပါ။ ရောထွေးလို့ မရပါဘူး။
နောက်ဆုံးတချက်ကတော့ ကျွန်မ တခုလပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တွန်းအား ပေးလိုက်တာပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးသူများကို ကျွန်မ အရမ်းမုန်းပါတယ်။ နအဖထက်တောင် ပိုမုန်းပါတယ်။ ကိုယ်ငွေရလိုမှုနဲ့ သူတပါး လူညွန့်တုံးအောင် ကြံရွယ်လုပ်ကိုင်မှုပါ။ မုန်းရုံတင်မက၊ ရွံလဲရွံ၊ စက်လဲစက်ဆုပ်ပါတယ်။ ကျွန်မဘ၀မှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ဆီက ဒီစကားမျိုး ထွက်လာတာ ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ အိပ်မက်ထဲတောင် ထည့်မမက်ခဲ့ဘူးပါ။
ပြီးတော့တခါ ကျွန်မမိတ်ဆွေဆီ ဖုန်းဆက်တဲ့ကိစ္စကို ကျွန်မ ဆက်စဉ်းစားပါတယ်။ မိတ်ဆွေက ကျွန်မထက် အသက်ကြီးသူလဲဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းလဲ ဖြစ်တာမို့သာ ကျွန်မအမျိုးသားကို ကျွန်မ ပြဿနာ မရှာတော့တာပါ။ တကယ်လို့များ ကျွန်မဖုန်းထဲက ဖုန်းနံပါတ်ကို သူယူပြီး၊ ကျွန်မရဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေဆီကိုသာ ဆက်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ ကျွန်မ သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားပြီး အရေးယူခိုင်းမိမှာပါ။ ကျွန်မဆီမှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကျောင်းသူ ညီမလေးတွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက စာသင်ပေးခဲ့သူလေးတွေပါ။ ကျွန်မကလဲ စာသင်ရတာကို အရမ်းကျေနပ်နှစ်သက်ပါတယ်။ အရမ်းကို ပျော်တာပါ။ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းတွေ ပြင်ပကျောင်းတခုမှာ တက်တုန်းကဆို ကလေးတွေနဲ့ တရုန်းရုန်းပါပဲ။ အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာ တက်နေတုန်း၊ ဒီပလိုမာတန်းက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ဘယ်လောက် ရင်းနှီးလဲဆို ကျွန်မရဲ့ စာမေးပွဲ အခန်းရှေ့မှာအထိ စာလိုက်မေးနေကြလို့၊ ကျွန်မ စာမေးပွဲခန်းကို စောင့်မယ့် ဆရာမက သူတို့ကို အော်ထုတ်ပြီး ကျွန်မကို စာမေးပွဲ ဖြေစေရပါတယ်။ ကျောင်းသား ဘ၀တုန်းကလဲ သူများကို စာရှင်းပြရတာ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့လဲ စာသင်ချင်လွန်းလို့ကို study guide လုပ်ပါတယ်။ ဆေးကျောင်းရောက်တော့လဲ အဆောင်မှာ လက်ဖက်သုတ်ဖိုး အကုန်ခံပြီးတော့ကို လူတွေခေါ်ပြီး စာစုဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ပါတယ်။ စာသင်ရမယ်ဆိုရင် ပျော်လွန်းလို့ နောက်တနေ့ စာမေးပွဲကို ညလုံးပေါက် ထိုင်ဖတ်မယ့် ညီမလေးတယောက်ကိုလဲ အဖော်အဖြစ် ကူထိုင်ပေးပါတယ်။ သူမေးတာရှင်းပြပါတယ်။ သူ လိုအပ်တာ ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်တော့လဲ ဒီအကျင့် မပျောက်သွား။ စာရင်းကိုင် ဖြစ်ချင်တယ်၊ အလုပ်ကလဲ (၉)နာရီမှ ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ ညီမလေး တစ်ယောက်ဆီကို ည (၁၀)နာရီကနေ ည (၁၂)နာရီအထိ စာသွားသင်ပေးပါတယ်။ night bus နဲ့ အိမ်ပြန်ပါတယ်။ သူလိုချင်တဲ့ Professional Membership ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့နေ့မှာ ကျွန်မတညလုံး ၀မ်းသာလွန်းလို့ အိပ်လို့တောင် မပျော်ပါ။ ကျွန်မအိမ်ကို လူဝင်လူထွက် များတာ၊ ကျွန်မဖုန်းကို ဆက်ပြီး အရေမရ၊ အဖတ်မရပြောတာတွေကို မကြိုက်ပေမယ့် စာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အချိန်မရွေးပါပဲ။ သြစတြေးလျ ရောက်ခါစမှာ အချိန်ခြားနားမှုတွေကို အတွက်မှားပြီး၊ ယူကေအချိန် ည(၂)နာရီမှာ ဖုန်းဆက်စာမေးတဲ့ ညီမလေးတယောက်ကိုလဲ စာအုပ်တွေ ထရှာပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေများတော့ မိုးလင်းသွားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အချိန်မေးလို့ ပြောပြတော့ သူက အားနာ၊ ကိုယ်ကတော့ စိတ်လေးတောင် မကွက်၊ သူ စာနားလည်သွားတာကိုပဲ ပျော်လိုက်ရတာ။ ကျောင်းအရ၊ အလုပ်အရ မြန်မာတယောက်မှ မရှိတဲ့မြို့ ရောက်လာတော့လဲ ဒီဇဟာ မပျောက်သွား။ စာသင်ပေးနေရတဲ့ ကလေးတွေ ရှိတာပါပဲ။ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေပါ။ ဒီက လူတချို့က အိုလယ်ဘယ် အောင်ပြီးရင် အေလယ်ဘယ်လ်ကို အပြင်က ဖြေတတ်ကြတယ်ရှင့်။ ကျွန်မလဲ ကျူရှင် မှတ်ပုံတင်သွားပြီး၊ သွားသင်ပေးနေတာပါ။ ခြုံပြောရရင် ကျွန်မ သူတို့အားလုံးကို သိပ်ချစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးလဲထား၊ မျှော်လင့်ချက်တွေလဲ ထားပါတယ်။ မြန်မာဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားလူမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူငယ်တွေဆိုတာ အနာဂတ် ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်တွေပါ။
ဒါကြောင့် ပြောတာပါ။ သူဆက်တဲ့ဖုန်းဟာ ကျွန်မရဲ့ညီမလေးတွေဆီသာ ရောက်သွားခဲ့ရင် ကျွန်မရဲ့ ဖုန်းထဲက ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ခိုးယူမှုနဲ့ ကျွန်မ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့။ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းမှာတင် သိက္ခာက ကျလှပြီ။ သူဘယ်လိုယူဆသွားမလဲ။ တပည့်တွေနဲ့သာဆို ကျွန်မ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဆရာသမားဂုဏ်သိက္ခာတွေ အဖတ်ဆည်မရ ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တခုလပ်ဖြစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ကျွန်မ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ချရတော့တယ်။ မသိသူများကို ကျွန်မနာမည်သုံးပြီး လက်တလုံးခြား လုပ်မှာစိုးလို့ လူသိရှင်ကြားကို ကွာရှင်းပြတ်စဲကြောင်း ကြေငြာလိုက်ရတာပါရှင်။ ကြောက်လွန်းလို့။
အဲလိုအချိန်မှာ ကျွန်မ လွယ်ထားတဲ့ ရင်သွေးလေးက (၅)လထဲမှာပါ။ သားလား၊ သမီးလားတော့မသိ။ လူ့လောကထဲမရောက်ခင်ကတည်းက ဖခင်မဲ့သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဖခင်ရှိပြီး လက်ဦးဆရာပီသစွာ သူ့စိတ်တွေ သွင်းလိုက်လို့ မူးယစ်ရာဇာ၊ လူလိမ်လူညာ ဖြစ်သွားမှာထက် စာရင်တော့ မရှိတာက ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆပါတယ်။ ကလေးဆိုတာ ဗီဇထက် ပြုပြင်ထိန်းကျောင်းမှုက ပိုအရေးကြီးတာပါ။ ဇပါလာမှာပဲဆိုပြီး သတ်မှတ်လို့ကလဲ မရ။ သူတို့လေးတွေက အင်မတန် သနားစရာကောင်းတာပါ။ မိဘဆိုတာကို ရွေးချယ်ခွင့် မရကြရှာပါဘူး။ မိဘရဲ့ အရိပ်မဲကိုကျတော့ ခံကြရပါတယ်။
မဆီမဆိုင် တခုလပ်ဖြစ်ကာမှ ပတ်ဝန်းကျင် (မြန်မာများ) ရဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ပေးမှုတွေက ကြုံရပြန်ပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများကတော့ အဲလို စပ်စပ်စုစု၊ စပ်စပ်ယှက်ယှက်တွေ မလုပ်ကြပါ။ ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပြီး၊ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ အကူအညီကို ပေးကြပါတယ်။ မြန်မာအများစု (အချို့မိတ်ဆွေကောင်းများ မပါပါ) ကတော့ အားမနာ၊ လျှာမကျိုး၊ အလိုက်မသိ၊ တယ်လီဖုန်းခအကုန်ခံပြီးတော့ကို ဓလေ့ထုံးစံ ဆိုတာတွေ လာပြောကြ၊ ပွဲတွေ၊ အခမ်းအနားတွေ သွားရင်း အချင်းချင်း တွတ်ထိုးကြ၊ မေးငေါ့ကြ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
သူတို့ ပြောလေ့ပြောထရှိတာက “မိန်းမကောင်း၊ ပန်းတပွင့်ပန်“တဲ့။ ပန်းတပွင့် ပန်ပြထားပြီး၊ နောက်ကွယ်မှာ တွဲခုတ်နေကြတဲ့ မိန်းမတွေကရော မိန်းမကောင်းတွေပဲလား။ အကြောင်းမလှလို့ တခုလပ်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် တည်တည်တံ့တံ့ နေနေကြတဲ့ မိန်းမတွေက ပန်းတပွင့် မပန်တာနဲ့ပဲ အလိုလိုနေရင်း မိန်းမယုတ်ဖြစ်သွားရရောလားလို့ တွေးမိတယ်။
အဲ-နောက်တခုက အိမ်ထောင်ရေးမှာ ယောက်ျားတွေကို မိန်းမတွေက ထိန်းသိမ်းရမယ်တဲ့။ တခုလပ်မိန်းမတွေဟာ ကိုယ့်ယောက်ျားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမရှိလို့ တခုလပ် ဖြစ်တာပါတဲ့။ ကျွန်မကတော့ အိမ်ထောင်ရေးကို အသိဥာဏ်ရှိသော လူနှစ်ယောက် ဘ၀ခရီး အတူလျှောက်ခြင်း လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေက လိုက်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုတယ်ဆိုရင် အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ မြည်းသတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်နေလို့လား ဆိုတာပဲ ပြန်မေးချင်တော့တယ်။
“နောက် အိမ်ထောင်ပြုဦးပေါ့။ ငယ်သေးတာပဲတဲ့“။ ဘယ်သူကများ ကျွန်မဘေးမှာ ယောက်ျားတယောက် လိုအပ်နေပါတယ်လို့ တောင်းဆို ဟစ်ကြွေးနေလို့လဲ။ ရှိခဲ့တဲ့ တယောက်တောင် ကန်ထုတ်ထားပါတယ် ဆိုမှ။ တခါလာသေးတယ်။ “လင်မရှိတဲ့မိန်းမဟာ မတင့်တယ်ဘူး“တဲ့။ တင့်တယ်ပါတယ်ရှင်။ ဘယ်လိုဌာနဆိုင်ရာမျိုး၊ ဘယ်လို ပွဲလမ်းသဘင်မျိုးမှာ ယောက်ျားတယောက်နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ယှဉ်ပြရမလဲလို့သာ စိမ်ခေါ်ချင်လာတော့တယ်။ ကွာခြင်းပြတ်စဲခြင်းကို ကျေညာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုယ့်မျက်နှာကို မှန်ထဲမှာ ကြည့်ရတာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းကို ခညောင်းလို့။ အရင်တုန်းကဆို ငါဟာ ကလေးငယ်လေး မွေးပြီးတာနဲ့ ဒီလို ကာမကွန်ယက်ထဲ ထပ်ရောက်ဦးမှာပါလား ဆိုပြီး၊ စဉ်းစားမိရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နေရင်းထိုင်ရင်း ကျက်သရေယုတ်ပြီး၊ အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေမှ အများကြီး။ တခုလပ်လည်း ဖြစ်ရော ပျော်လွန်းလို့ ရှန်ပိန်ဖောက်ပြီးကို သူငယ်ချင်းတွေကို ဧည့်ခံခဲ့တာပါ။ မင်္ဂလာရှိလွန်းလို့။
“ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟာ မတူဘူး။ ကလေးလေးတယောက်နဲ့ ဘ၀ကို ဆက်လျှောက်လို့ မရဘူး။ သူတို့ရှိမှ ဖြစ်မယ်“တဲ့။ ကလေး တယောက်ထဲတင်မက အများကြီးကိုပါ တယောက်တည်း တာဝန်ယူ ပျိုးထောင် ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ မုဆိုးမတွေ၊ တခုလပ်မတွေ အများကြီးပါ။ နောက်အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကလေးတာဝန်တွေယူနိုင်တဲ့ မုဆိုးဖိုတွေ၊ တခုလပ်ဖိုတွေကသာ ရှားပါးတာ။ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား အရည်အချင်းကွာတာ ဒါကိုကြည့်ရင်တောင် ရှင်းနေပါပြီ။ ခန္ဓာဗေဒ သင်ရတုန်းက မိန်းမအလောင်းနဲ့ ယောက်ျားအလောင်း ဘာကွာလဲ ဆိုတာ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကို လေ့လာဖူးပါတယ်။ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား တကယ်ကွာတာ နှစ်နေရာထဲပါ။ အဲဒါတွေကြောင့် မိန်းမတယောက်ကို နိမ့်ကျတယ် သတ်မှတ်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးပါ။ ဒါတွေကြောင့် ကိုယ် လူ့လောကထဲ ရောက်လာပြီး၊ အသက်ဆက်ရှင်ခွင့် ရခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ ယောက်ျားတွေက ခွဲခြားတယ်ဆိုထားဦး၊ မိန်းမတွေကပါ ဒါတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် နိမ့်ပါးတယ်ထင်နေတာက ပိုဆိုးပါတယ်။ တကယ်တော့ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ ဘာမှ မကွဲပြားပါ။ တန်းတူရည်တူပါ။ လူတွေက ကွဲပြားအောင် လိုက်လုပ်နေကြတာပါ။ အဲ-အင်အားချင်းတော့ ကွာတာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အင်အားချင်းကွာလို့ အထင်ကြီး ကိုးကွယ်စတမ်း ဆိုရင် ကျွန်းသစ်လုံးကြီးတွေကို နှာမောင်းနဲ့ ဆွဲနိုင်တဲ့ ဆင်တွေကိုကျတော့ကော ကိုးကွယ်ရမှာတဲ့လား။
နောက်ဆုံးတခု ကျန်ပါသေးတယ်။ အန်တီကြီးတယောက်က သြ၀ါဒ ခြွေတာပါ။ ရယ်ရင်တောင် ဟဟမရယ်နဲ့။ လူအထင်သေးတတ်တယ်။ သမီးက တခုလပ် ဆိုတော့လေ“ တဲ့။ သြော်-ဒုက္ခ။ ဒုက္ခ။ လွတ်လပ်တဲ့ လူ့ဘောင်ကြီးမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ရယ်ချင်ရယ်မယ်၊ ငိုချင်ငိုမယ်ပေါ့။ အိမ်ထောင်နဲ့ မိန်းမတွေ ရယ်ရင်တော့ အိမ်ထောင်ရေးသာယာလို့ ထင်ပါရဲ့တဲ့။ မုဆိုးမတွေ ရယ်ရင်ကျတော့ ဒီလောက် ယောက်ျား ဆုံးပြီးတာတောင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ တော်လိုက်တာတဲ့။ ဘယ်နဲ့ တခုလပ်တွေကျတော့ ဟဟတောင် မရယ်ရဘူးတဲ့။ ပြဿနာ အတော်ရှာတဲ့သူတွေပဲ။ တခုလပ် ဆိုတာကကော လူစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ စက်ရုပ်ကြီးတွေမို့လား။ လောကမှာ လူအထင်သေးတာ၊ မသေးတာ၊ ကဲ့ရဲ့တာ၊ မရဲ့တာတွေသာ လိုက်ကြည့်နေရရင် ထမင်းတောင်စားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်ဘ၀အကြောင်းနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေကြတာပဲ။ အဲ-လာသေးတယ်။ တခုလပ်ရယ်တာဟာ လူပျိုလေးတွေကို မြူဆွယ်တာပါတဲ့ရှင်။ လူပျိုလေးတွေပဲ။ သူတို့ဘာသာ စိတ်လှုပ်ရှားတာတော့ တခုလပ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရှိသူ ရယ်ရင်လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်တာပဲ။ အပျိုရယ်လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပဲ။ ဘယ်နဲ့၊ တခုလပ်တွေကမှ လာခလုတ်တိုက် နေရတာတုံး။ အဲ-လူပျိုလေးတွေက တခုလပ်ရယ်မှပဲ တသသ စွဲလမ်းသွားကြတယ် ဆိုရင်တော့ ရေမရှိတဲ့ ချောင်းမှာပဲ နှာခေါင်းဖော်ပြီး သွား သေလိုက်ကြပေတော့။
ဤတွင် တခုလပ်တယောက်၏ ပေါက်ကွဲသံစဉ်များ အဆုံးသတ်ပါပြီ။
(၁၅၊ ၁၂၊ ၂၀၀၇)
ခင်မမမျိုး ဘလော့ဂ် မှ